ရိုးမယျဖှဲ့ – My Blog
ကိုညိုကွီးသမီးခရီးထှကျဖို့လိုတာတှဝေယျထားပေးဦး””သွျောဟုတျဟုတျကဲ့ပါမမလေးမမလေးကဘာနဲ့သှားမှာလညျး” ”ရှငျသွျောကားနဲ့ပဲသှားရမှာတောလမျးလညျးဖွဈခရီးဝေးလညျးသှားရမှာဆိုတော့အိမျကကားယူမသှားတော့ဘူး” ”ကြှနျတျောပွငျဆငျထားလိုကျပါမယျမမလေး” ကိုညိုကွီးမှာဧပရယျထကျအသကျကွီးသျောလညျးဧပရယျအားလေးစားမှုဖွငျ့မမလေးဟုချေါခွငျးဖွဈသညျ။ မှာစရာရှိသညျမြားမှာ၍ထှကျသှားသောအလှဘုရငျမလေးဧ။ျသေးသှယျသောခါးလေးအောကျမှတောငျ့တငျးပွညျ့ဖွိုးသောတငျစိုငျ အိအိတငျးတငျးကွီးမြားကိုညိုကွီးမကျြစိကြှတျထှကျမတတျကွညျ့နမေိသညျ။ဧပရယျတဈလှမျးလှမျးသှားတိုငျးတငျစိုငျကွီးမြားက စညျးခကျြကတြုနျခါသှားသညျ့အပွငျအင်ျကြီနှငျ့ထဘီကွားမှခါးသားဝငျးဝငျးလေးကလကျကနဲလကျကနဲဖွဈသှားသေးသညျ။ ”ဟဲ့ညိုကွီးသမီးခရီးထှကျမှာတဲ့အဆငျအပွဆေုံးကားစီစဉျပေးလိုကျ”
”သွျောဟုတျကဲ့ပါအနျတီလေးခုပဲဧပရယျလာပွောသှားတာကားကတော့expressတော့မရှိဘူးသီးသနျ့ငှားတဲ့စလှနျးပဲရမှာ” ”အပွနျလညျးကွိုပွောရငျကြှနျတျောစီစဉျပေးလို့ရပါတယျသဘကျခါနံနကျ၇နာရီစထှကျမှာဟိုကိုညနေ၅ခှဲ၆လောကျရောကျမယျဗြ” ”အေးအေးမငျးပဲစီစဉျထားလိုကျ”ညိုကွီးမှာဧပရယျတို့အိမျမှအလုပျသမားမဟုတျသျောလညျးဧပရယျ့အဖကေုမ်ပဏီတှငျ၈နှဈခနျ့အလုပျလုပျလာသဖွငျ့ဧပရယျတို့နှငျ့ အတျောရငျးနှီးသညျ။အသကျ၄၂နှဈရှိပွီဖွဈပွီးဧပရယျတို့အိမျသို့ပစ်စညျးလာသယျတိုငျးဂိုထောငျနှငျ့ကပျလကျြလသာဆောငျတှငျ လှမျးထားလရှေိ့သညျ့ဧပရယျ့ဘျောလီလေးမြားကိုကိုငျ၍ဧပရယျ့ပငျတီနုနုလေးမြားဖွငျ့လီးကိုအုပျကာဂှငျးထုလရှေိ့သညျ။ ညိုကွီးမှာဧပရယျ့ကိုစတငျမွငျမွငျခွငျးကပငျမွငျသူငေးလောကျသညျ့အလှဘုရငျမလေးကိုစိတျထဲမှအကွိမျကွိမျပွဈမှားခဲ့မိသညျ။ ယခုလညျးပစ်စညျးလာသယျရနျရောကျလာခွငျးဖွဈ၍၃ထပျသို့တကျလာခဲ့သညျ။ညိုကွီးအတှကျကံကောငျးပွနျပွီ။
လှမျးထားသောအဝတျမြားထဲတှငျအသားရောငျနုနုဆှဲသားဇာဘျောလီလေးနှငျ့အဖွူရောငျခြိတျ၅ခုတပျဇာဘျောလီလေးတို့ကိုတှေ့ လိုကျသညျ။မကျြလုံးကိုဝကွေ့ညျ့လိုကျရာအဖွူရောငျဆှဲသားပငျတီနုနုလေးတဈထညျကိုပါတှလေို့ကျသညျ။ ညိုကွီးစိတျမထိနျးနိုငျတော့။ဧပရယျ့ဘျောလီအသားရောငျလေးကိုရငျပုံခှကျနရောမှကိုငျ၍မကျြနှာတှငျအပျကာအားရပါးရရှူရှိုကျ လိုကျသညျ။မှေးပြံ့နသေောရနံ့သငျးသငျးလေးကညိုကွီးဧ။ျတဈထပျတညျးသောပုဆိုးအောကျမှလိငျတံကိုတောငျမတျလာစသေညျ။ ညိုကွီးမှာဧပရယျ့အလှကှနျယကျတှငျမိခဲ့သောယောကျြားပေါငျးမြားစှာအနကျမှအရေးမပါသောအညတရတဈယောကျသာဖွဈသညျ။ သို့သျောထိုအလှဘုရငျမလေးကလှနျခဲ့သော၅ရကျကပငျလူကုံထံအသိုငျးအဝိုငျးထဲမှလူရညျသနျ့တဈဦးနှငျ့စစေ့ပျသှားခဲ့သညျ။ စစေ့ပျပှဲနတှေ့ငျဧညျ့သညျမြားကိုဧညျ့ခံရငျးပနျးရောငျဝတျစုံလေးဖွငျ့အလှကွီးလှနသေညျ့ဧပရယျ့ကိုညိုကွီးစိတျမထိနျးနိုငျဖွဈမိသညျ။ ဧညျ့ခံပှဲပွီးပွီးခငျြးပငျဧပရယျ့ပနျးရောငျဝတျစုံလေးအထကျမှပျေါနသေောနူးညံ့ဝါဝငျးနသေညျ့ပုခုံးသားလေးမြားနှငျ့နို့ညှာလေးကို မှနျး၍စိတျထဲမှဧပရယျအားမလှုပျနိုငျအောငျကွိုးတုပျကာအကွိမျကွိမျစိတျမှနျးဖွငျ့မုဒိမျးကငျြ့နမေိခဲ့သညျ။
ညိုကွီးအတိတျကိုပွနျတှေးနရောမှယခုရရှိထားသညျ့အခှငျ့အရေးကိုသတိပွနျရလာသညျ။ဧပရယျမှာသတို့သားလောငျးနှငျ့ခရီးထှကျ ပွီးပွနျလာ၍မကွာမီပငျလကျထပျလြှငျထပျမညျဖွဈ၍နောကျဆိုလြှငျယခုကဲ့သို့အခှငျ့အရေးရခငျြမှရပတေော့မညျ။ ညိုကွီးဧပရယျ့ဘျောလီလေးကိုအငမျးမရရှူရှိုကျရငျးဧပရယျ့ပငျတီလေးကိုပုဆိုးအောကျသို့ထညျ့ကာလီးတံကိုလုံအောငျပတျလိုကျ သညျ။ထို့နောကျရှတေို့းနောကျငငျစလုပျတော့သညျ။နူးညံ့လှနျးသောပငျတီအသားပြော့ပြော့လေးကညိုကွီးဧ။ျလီးတံကွီးတဈလြှောကျ ကောငျးလှနျးသောအထိအတှကေို့ပေးစှမျးနသေညျ။ညိုကွီးဧ။ျလကျကလညျးဧပရယျ့ဘျောလီရငျပုံခှကျဧ။ျအောကျမှဧပရယျ့နို့သီးလေး မြားထိနမေညျ့နရောကိုလကျမဖွငျ့ပှတျနမေိသညျ။ညိုကွီးဧ။ျစိတျထဲတှငျတော့အလှဘုရငျမ၊အိနွေ်ဒရှငျမလေးဧပရယျအားမလှုပျနိုငျ အောငျခြုပျ၍မုဒိမျးကငျြ့နမေိသညျ။
ညိုကွီးအထငျကြှဲကောသီးတခွမျးစာခနျ့ရှိမညျ့ဧပရယျ့နို့အုံတငျးတငျးအိအိကွီးနှဈအုံကိုလညျး စိတျကူးဖွငျ့အဓမ်မကိုငျနမေိသညျ။ဧပရယျအားဂိုထောငျထဲရှိပစ်စညျးဖာပျေါတှငျလေးဖကျထောကျခြုပျထားပွီးနောကျမှနေ၍ဧပရယျ့ ပနျးလေးထဲသို့လီးကိုစိတျကူးဖွငျ့ထညျ့နမေိသညျ။ဧပရယျ့အျောသံငိုသံမြားကညိုကွီးကိုပိုစိတျကွှစသေညျ။ ”အအအအားးးရှိးးးးးးထှကျပွီဧပရယျဟားဟားမငျးအပြိုဘဝကိုငါရသှားပွီအအရှိးးးးးးးးး” ညိုကွီးဧပရယျ့ပငျတီလေးအားလြှငျမွနျစှာဖယျလိုကျပွီးသုကျရညျမြားကိုဧပရယျ့ကိုယျထဲသို့စိတျကူးဖွငျ့ပနျးထညျ့လိုကျတော့သညျ။ ”တီတီးးးးးးးးးးးတီတီတီးးးးးးးးးး” အောကျမှပစ်စညျးသယျရနျစောငျ့နသေောကားကစိတျမရှညျတော့သဖွငျ့ဟှနျးတီးတော့သညျ။ ”လာပွီဗြို့ဒီမှာပစ်စညျးရှာနရေလို့”ညိုကွီးဧပရယျ့အဝတျအစားမြားကိုအဝတျတနျးတှငျစနဈတကပြွနျလှမျးသညျ။ ထို့နောကျပစ်စညျးဖာကိုထမျးကာအောကျသို့ပွေးဆငျးလာခဲ့တော့သညျ။
အခြိနျ၁၀နာရီခှဲခနျ့ကားစီးပွီးနောကျဧပရယျနှငျ့ကောငျးကြျောတို့နယျမွို့လေးသို့ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။ ”အငျးလူလညျးနှမျးခြိနပွေီရခြေိုးလိုကျဦးမှ” ဟငျးဟငျးသူဧပရယျ့ကိုရညျးစားစကားစပွောတော့ကွောငျတောငျတောငျနဲ့။ စာအုပျကွီးကလကျကကိုငျလာသေးတယျ။မကျြနှာကွီးကလညျးနီလို့။ဆိုငျးမဆငျ့ဗုံမဆငျ့ပွောခလြိုကျတာလေ။ ဒါပမေယျ့ခုတော့အဲဒီကောငျကဧပရယျရဲ့အခဈြရဆုံးခဈြသူဖွဈလာပွီလေ။သွျော….သိပျခဈြရတဲ့ကိုရယျလေ။ ကို့ပုံစံကပိနျပိနျပါးပါးအသားဖွူဖွူပမေယျ့ရုပျကတညျတညျတံ့တံ့လေးမို့ဧပရယျနှငျ့လိုကျဖကျသညျဟုပွောကွသညျ။ ကို့အကွောငျးတှစေဉျးစားရငျးရပေနျးအောကျတှငျထိုငျနမေိသညျမှာအတျောကွာသှားသညျ။ ရပေနျးကိုပိတျ၍တဘကျတဈထညျပတျကာရခြေိုးခနျးထဲမှထှကျခဲ့သညျ။
”အငျးငါ့အသားလေးကဖွူဥနတောပဲဟငျးဟငျးကိုကတော့ကွညျ့ခငျြမှာပေါ့အခြိနျဆှဲထားလိုကျဦးမယျ” ဧပရယျရခြေိုးပွီးကိုယျတုံးလုံးဖွငျ့အခနျးထဲမှမှနျရှတှေ့ငျတဈယောကျတညျးစဉျးစားခနျးဖှငျ့နမေိသညျ။ ”အငျးအင်ျကြီကအပါးပဲဝတျမှာဆိုတော့ဘျောလီပဲဝတျလိုကျပါမယျလေ”ဧပရယျဖွောငျးစငျးသှယျတနျးနသေောပေါငျတံဝငျးဝငျးလေး တဈလြှောကျအသားရောငျပငျတီလေးကိုဆှဲတငျလိုကျသညျ။အိစကျလုံးဝနျးနသေောတငျစိုငျတငျးတငျးကွီးနှဈလုံးတှငျပငျတီလေးက ကှကျတိကပျသှားသညျ။
ထို့နောကျခြိတျ၅ခုတပျအသားရောငျဘျောလီလေးကိုပုခုံးပျေါသို့ကွိုးတငျလိုကျပွီးမို့ဝနျးတငျးအိနသေော ရှရေငျအစုံအားဘျောလီရငျပုံခှကျတှငျအံကဖြွဈအောငျထညျ့လိုကျသညျ။ထို့နောကျဘျောလီခြိတျမြားကိုတဈခြိတျခငျြးသခြောတပျ လိုကျသညျ။ထို့နောကျတငျးယငျးနသေောဘျောလီအားအံကဖြွဈသှားအောငျ့ပွုပွငျလိုကျသညျဖွူဝငျးနသေောရငျညှနျ့နှဈမှာက ဘျောလီပျေါမှလြှံထှကျနသေညျ။ထို့နောကျအစိမျးရောငျနုနုထဘီပှငျ့ရိုကျအပြော့လေးကိုတငျးနအေောငျဝတျလိုကျသညျ။ထို့နောကျရငျအပျေါပိုငျးတှငျဇာစဖွဈသညျ့အစိမျးရောငျလကျပွတျလေးကိုတငျးယငျးစှာဝတျလိုကျသညျပုခုံးပျေါတှငျတငျးနသေောဘျောလီကွိုးနှဈခြောငျးနှငျ့အင်ျကြီအောကျမှရငျညှနျ့လေးမှာယောကျြားမြားကိုလညျပွနျငေးစလေောကျသညျစိတျတိုငျးကအြလှပွငျဆငျပွီးနောကျဧပရယျမှနျထဲမှပုံရိပျကိုကနြေပျစှာကွညျ့ပွီးအခနျးပွငျသို့ထှကျခဲ့သညျ။
”ကိုရလေမျးသှားလြှောကျရအောငျ”ဟခဈြကတကယျကိုလှနတောပဲသူမြားတှကွေညျ့ကုနျတော့မယျ””သွျောကွညျ့တာမြားကွညျ့ပစပေေါ့ကိုကလညျးဟငျးဟငျး””ဟာဟြောငျတှဟေိုမှာကွညျ့စမျးလီးတယျကှာအသားဖွူဖွူလေးအိုးလေးကလညျးတငျးနတောပဲကှာ””ဟြောငျလနျးလှခညျြလားဟ””တောကျအဲ့လိုဆျောလေးသာလေးဖကျကုနျးခိုငျးပွီးမုဒိမျးကငျြ့လိုကျရလို့ကတော့ရှိးးးပွောရငျးလီးတောငျတောငျတယျ” ”အေးကှာအိုးတှကေရှယျပဲရုပျကလညျးခြောဖငျထောငျခိုငျးပွီးဖငျလိုးလိုကျရလို့ကတော့” ဧပရယျဧ။ျသေးကငျြသောခါးလေးနှငျ့လုံးဝနျးပွညျ့ဖောငျးသောဖငျသားမြားကိုကွညျ့ရငျးလူတဈစုစိတျကွှနကွေသညျဧပရယျကတော့အကွညျ့ခံရပေါငျးမြားပွီဖွဈ၍ဂရုပငျမစိုကျမကျြနှာလေးမော့ကာမော့ကာနှငျ့ပွုံးရယျရငျးလမျးလြှောကျနသေညျ
မာလအဆငျ့တကျလာသညျ။ဧပရယျဧျခါးလေးကိုလကျတဈဖကျဖွငျ့ဖကျထားပွီးကြောပျေါမှညာလကျကတဖွညျးဖွညျးဧပရယျ့ခြိုငျးကွားဆီရောကျလာသညျဧပရယျ့ရှတှေ့ငျလညျးမာလတို့လူစုထဲမှတဈယောကျကကြောပေးပီးကပျရပျနသေဖွငျ့ဧပရယျလှုပျမရ။မာလဧ။ျညာလကျကလညျးဧပရယျ့ခြိုငျးဆီသို့ရောကျလာသညျဧပရယျမှာညာလကျဖွငျ့ကားအလယျမှတနျးကိုကိုငျထားသဖွငျ့ညာလကျကမွှောကျနသေညျ။ဧပရယျမာလဧျလကျလူကွားထဲမှကွပျညှပျ၍တိုးဝငျလာသညျကိုသိသျောလညျးမကွာပါဘူးလဟေုတှေးကာအောငျ့ခံနလေိုကျသညျဧပရယျဧျနို့နှဈအုံမှာရှမှေ့မာလတို့ လူဧျကြောတှငျအနညျးငယျဖိမိနသေညျ။မာလဧျလကျမှာတဖွညျးဖွညျးနှငျ့ဧပရယျဧျမို့တငျးဆူဖွိုးသောညာဖကျနို့အုံပျေါသို့ရောကျ လာသညျ။
ဧပရယျမှာမိမိဧျရငျသားတဈအုံလုံးကိုပယျပယျနယျနယျအကိုငျခံနရေသဖွငျ့အလှနျနရေခကျနသေညျမာလကလညျးအခှငျ့အရေးကိုလကျလှတျမခံသေးကငျြလှနျးသောဧပရယျ့ခါးနှဲ့လေးကိုဆှဲဖကျထားရာဧပရယျဧ။ျတငျးယငျးလုံးဝနျးနသောတငျစိုငျအိအိတငျးတငျးကွီးနှဈလုံးမှာမာလဧ။ျပေါငျခွံနှငျ့ဖိကပျမိနသေညျ။ မာလမှာပုဆိုးကိုလှနျတငျထားသောကွောငျ့လီးတနျကွီးမှာဧပရယျဧျဖှံ့ထှားလှပသောဖငျတုံးကွီးနှဈတုံးကွားတှငျအမွောငျးလိုကျရောကျနသေညျဧပရယျမှာရှကျလှနျးသဖွငျ့လှပသောမကျြနှာနုနုလေးမှာနီရဲနသေညျဧပရယျကိုယျကိုစောငျး၍ရုနျးထှကျရနျကွိုးစားလိုကျသျောလညျးမာလဧျလီးတနျကွီးအားပိုတောငျလာအောငျဖိပှတျပေးသလိုဖွဈနရော မာလဧ။ျလီးတံကွီးမှာဧပရယျ့ဖငျတုံးမြားဧျနူးညံ့အိစကျမှုကိုတဝကွီးခံစားနရေသညျ။မာလကဧပရယျအားရငျခှငျထဲထညျ့၍လီးဖွငျ့ထောကျထားပွီးလညျကုပျဝငျးဝငျးလေးအားပါးစပျဖွငျ့စုပျနမျးတော့သညျ။ ဧပရယျ့နို့နှဈလုံးကိုလညျးမိမိရရကွီးစိတျတိုငျးကကြိုငျကာဆုပျနယျတော့သညျ။
ထို့ပွငျအောကျကလညျးလိုးနသေလိုမြိုးလီးဖွငျ့ဧပရယျ့ဖငျကိုညှောငျ့ပေးနရောဆရာဝနျမလေးဧပရယျမှာမာလဧ။ျအဝတျမခြှတျပဲလိုး ခွငျးခံနရေသလိုဖွဈနသေညျ။မာလဧ။ျလကျမြားကလညျးဧပရယျ့နို့မြားကိုကိုငျရုံဖွငျ့အားမရ။ပေါငျကွားသို့ရောကျလာသညျ။ တဈခါတဈခါမာလနောကျမှညှောငျ့လိုကျလြှငျဧပရယျဧ။ျကိုယျလုံးလေးမှာသိသိသာသာကွီးကိုတုနျတုနျသှားသညျ။ ဧပရယျမှာလညျးမိမိဧ။ျအသားစိုငျမြားကိုသူစိမျးယောကျြားကွီးတဈဦးကကိုငျခငျြတိုငျးကိုငျနသေောကွောငျ့ပနျးလေးထဲမှစိုစိစိဖွဈလာသညျ။မာလဧ။ျလီးတံကွီးကဧပရယျ့ဖငျကွားတှငျကှကျတိကိုဝငျနရောဧပရယျမှာဖငျသားမြားကိုအလိုလိုကြုံ့ထားမိသညျ။ မာလကဧပရယျဧ။ျနို့နှဈအုံလုံးကိုညာလကျဖွငျ့ကိုငျ၍ရငျခှငျထဲဆှဲဖကျထားသညျ။
ထို့ပွငျဧပရယျ့အင်ျကြီမှာလညျးမာလဧ။ျကောငျးမှု ကွောငျ့အင်ျကြီနှငျ့ထဘီကွားလကျတဈဝါးစာကြျောကြျောပျေါနသေညျ။မာလကဧပရယျ့ဖငျကွီးအားကိုငျညှဈသညျ့အပွငျ တဈခါတဈခါဧပရယျဧ။ျပေါငျရငျးနားထိခှဲထားသောထဘီစကတျလေးထဲသို့လိုကျနှိုကျလာသညျ။ ဧပရယျသညျးမခံနိုငျတော့။ပေါငျနှဈလုံးကိုလိမျယှကျလိုကျပွီးနောကျသို့လှညျ့ကာ ”ရှငျလှနျလာပွီနျောကြှနျမအျောလိုကျရမလား” ဧပရယျဧ။ျနှုတျခမျးဖူးလေးမှာတဆတျဆတျတုနျနသေညျ။ မာလကလကျကိုဧပရယျ့ပေါငျကွားမှရုတျလိုကျသျောလညျးအလြှော့တော့မပေး။ လကျကတော့ထုံးစံအတိုငျးဧပရယျ့နို့တှကေိုငျနသေညျ။ဧပရယျမာလဧ။ျလကျကိုဆှဲဖယျ၍အျောတော့မညျ့ဆဲဆဲမှာပငျ…. ”ကဲဆငျးမယျဟဆေ့ငျးကွဆငျးကွ”စပါယျယာဧ။ျအျောသံကွောငျ့မာလစိတျညဈသှားသညျ။ဧပရယျ့နို့အုံကိုခပျကွမျးကွမျးတဈခကျြ နယျပွီးမှလှတျပေးလိုကျသညျ။ ဧပရယျကမာလဧ။ျလကျသရမျးမှုကွောငျ့လကျတဝါးစာမကဘျောလီအောကျဆုံးခြိတျပငျပျေါနပွေီဖွဈသောခါးတိုအင်ျကြီလေးကို ပွနျဆှဲခသြညျ။
ဧပရယျဧ။ျခါးသားဝငျးမှတျမှတျလေးမြားကိုမာလစိတျကွိုကျကိုငျသှားခဲ့သညျ။ဝမျးဗိုကျသားလေးမြားကိုလကျကွမျး ကွီးဖွငျ့ဖကျကိုငျသညျ့အပွငျခကျြလေးကိုပါလကျခြောငျးနှငျ့ဆှခဲ့သဖွငျ့ဧပရယျနုံးခြိသှားသညျ။ ဧပရယျစိတျတှတေမြိုးကွီးဖွဈနသေညျ။မိမိတယုတယထားခဲ့သညျ့ရငျသားလှလှတှကေိုကူလီတဈယောကျကကိုငျခငျြတိုငျးကိုငျ သှားခဲ့သညျ။ဘေးကကောငျတှကေလညျးဧပရယျ့ဖငျသားတှကေိုကိုငျကွတာမြားရစရာတောငျမရှိ။ ပနျးလေးထဲမှအရညျအနညျးငယျစီးကနြသေညျဟုထငျမိသညျ။ ”တောကျမာလတို့ကတော့ကွီးပှားတယျကှာ””ဟြောငျစကားမမြားနဲ့မကျြခပြွေတျသှားမယျ” ဧပရယျမိတ်တူကူးပွီးနောကျဈေးထဲသို့လမျးကွုံဝငျဝယျလိုကျမညျဟုစိတျကူးကာလြှောကျလာသညျ။သားငါးတနျးလှနျပွီးနောကျဟငျးရှကျ တနျးသို့သှားရနျဈေးလမျးကွားလေးထဲသို့ဝငျလိုကျသညျ။ဈေးလမျးကွားမှာလူအလှနျပွတျပွီးမညျသူမြှဖွတျသနျးလမေ့ရှိကွ။
အကွောငျးမှာထိုဈေးလမျးကွားတှငျဆိုငျခနျးပကျြမြားသာရှိပွီးဟငျးရှကျတနျးသို့ရောကျရနျမှာလမျးမပျေါမှသှားလြှငျပိုနီးသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ဧပရယျမှာဒီဈေးသို့၂ခါလောကျရောကျဖူးသျောလညျးမကြှမျးသေးသဖွငျ့ဤလမျးကွားထဲသို့ဝငျလာမိခွငျးဖွဈသညျ။ ”ဟြောငျတှစေရအောငျလမျးကွားထဲဝငျသှားပွီ””စားရလို့ကတော့ဆှမြေိုးမပွေီ့ကှာ” မာလတို့၅ယောကျဧပရယျဧ။ျနောကျမှလိုကျသှားကွပွီးလမျးနှငျ့အတျောဝေးသညျ့နရောရောကျလြှငျဧပရယျအားလမျးဘေးမှအမိုးအဖီ လေးအောကျသို့ဆှဲသှငျးလိုကျပွီးအဆငျသငျ့ရှိနသေောစားပှဲခုံပျေါတှငျကုနျးခိုငျးထားလိုကျသညျ။ ”ဟငျရှငျရှငျတို့လှတျကြှနျမအျောလိုကျမှာနျော”မာလကဧပရယျဧ။ျနို့နှဈလုံးကိုမိမိရရကိုငျ၍ဖငျကိုဆကျတိုကျညှောငျ့ပေးလိုကျသညျ။
ထို့နောကျဧပရယျဧ။ျအင်ျကြီနှိပျသီးမြားကိုဖွုတျ၍အင်ျကြီကိုလှနျတငျလိုကျသညျ။ထို့နောကျဧပရယျ့ထဘီကိုလငျြမွနျစှာလှနျ၍ပငျတီကို ဆှဲခြှတျကာလီးဖွငျ့အဖုတျကိုတလေို့ကျသညျ။ဘျောလီထဲလကျနှိုကျကာနို့ကိုငျသညျ။ဧပရယျဧ။ျဘျောလီမှာတငျးကပျြနသေဖွငျ့နှိုကျမရပဲရငျညှနျ့သားဖောငျးဖောငျးအိအိလေးမြားကိုသာကိုငျမိသညျ။ မာလကဧပရယျ့ဘျောလီခြိတျ၂ခုကိုဖွုတျလိုကျပွီးအနညျးငယျလြော့ရဲရဲဖွဈသှားသောဘျောလီထဲသို့လကျနှိုကျလိုကျသညျ။ ဧပရယျဧ။ျနို့အုံလေးမှာနုထှေးအိစကျတငျးယငျးနပွေီးနို့သီးလေးမှာလညျးအပြိုလေးလိုပငျနို့အုံပျေါတှငျသေးသေးလေးကပျနသေညျ။ မာလကဧပရယျ့ညာဖကျနို့အုံကိုအားရပါးရဆုပျနယျရငျးနို့သီးလေးကိုလိမျဆှဲပေးလိုကျရာဧပရယျကြောပွငျလေးကော့တကျလာသညျ။ မာလအခြိနျမဆိုငျးတော့။ဧပရယျဧ။ျခါးနှဲ့နှဲ့ဝငျးဝငျးလေးကိုကိုငျဆှဲကာလီးကိုဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။
သို့သျောဧပရယျမှာအတငျးရုနျးနသေဖွငျ့အပေါကျမတညျ့ပဲခြျောသှားသညျ။မာလဧ။ျလီးကွီးမှာဆရာဝနျမလေးဧပရယျဧ။ျအစိလေး ကိုတိုကျမိသှားရာဧပရယျတှနျ့သှားသညျ။မာလနောကျထပျအကွိမျကွိမျထညျ့သျောလညျးမဝငျနိုငျသဖွငျ့စိတျမရှညျတော့။ ”ဟြောငျတှဒေီကောငျမဖငျကိုထိနျးထားစမျး””ဖွနျးဖွနျးးးးငွိမျငွိမျနစေမျးကောငျမမငျးကိုကောငျးအောငျလိုးပေးမလို့” ”ကယျကွပါဦးရှငျကယျကွပါ”လမျးနှငျ့ဝေးသျောလညျးလူတဈယောကျယောကျကွားသှားပွီးအုပျလိုကျရောကျလာပါကကိုယျကြိုးနဲ မညျဖွဈ၍မာလတို့၅ယောကျလုံးခှေးပွေးဝကျပွေးပွေးကွတော့သညျ။အမှနျမှာမညျသူမှမကွားလိုကျ။ဧပရယျအဝတျမြားကိုပွငျဝတျ ၍ထိုနရောမှအမွနျထှကျခဲ့သညျ။ကွောကျရှံ့ထိတျလနျ့မှုကွောငျ့တဈကိုယျလုံးတုနျနသေညျ။ကို့ကိုတော့ပွနျမပွောပွခငျြတော့။ အပြျောခရီးတှငျပွသနာမြားမဖွဈစခေငျြ။ထိုသူတို့ဧ။ျမကျြနှာမြားကိုလညျးကောငျးကောငျးမတှလေို့ကျရ။ အဖွဈအပကျြမြားမှာမွနျဆနျလှနျးခဲ့သညျ။
ဧပရယျဘဝပကျြမညျ့ဘေးမှသီသီလေးလှတျခဲ့သညျ။နောကျဆိုဒီဈေးမလာရဲတော့။အကယျ၍ထိုသူမြားသာထှကျမပွေးပဲဆကျကငျြ့လြှငျဆိုသညျ့အတှေးကဧပရယျအားကြောခမျြးစသေညျ။ ”ဟြောငျကှာလီးပဲဘယျသူမှမကွားလောကျဘူးကှလိုးရတော့မယျ့ဟာကိုကှာ” ”လီးကွားရငျထောငျထဲလညျးဝငျရမယျစောကျခှကျလညျးစုတျမှာဟ” ”နာတယျကှာလီးဖငျကွီးကိုဖွူဖှေးပွီးလုံးတငျးနတောပဲကှာတောကျနို့တှဆေိုလညျးတငျးအိနတောပဲ” မာလတို့မှာကွိတျမနိုငျခဲမရဖွဈနကွေသညျ။ ”ကိုရယျကိစ်စမရှိပါဘူးကားမရလညျးဒီမှာပဲတဈညတညျးကွတာပေါ့””ခဈြရယျဒီမှာတညျးတာကိစ်စမရှိဘူးကိုယျတို့အလုပျတှလှေဲထား တာနှဈပတျတောငျရှိပွီရတဲ့ကားနဲ့ပဲပွနျကွတာပေါ့ညနေ၅နာရီမှာကားကွုံတှရှေိတယျလို့ပွောကွတာပဲ” ”ကိုယျတို့မင်ျဂလာဆောငျဖို့လညျးနောကျ၂လလောကျဆိုတော့စစီစဉျခငျြပွီ” ”အငျးပါကိုရယျကားရရငျတော့ပွနျကွတာပေါ့ဒါပမေယျ့ဒီလိုမွို့လေးမှာကားရဖို့မလှယျဘူးထငျတယျနျောကို” ”အငျးခဈြကိုယျဂိတျမှာသှားစုံစမျးကွညျ့ဦးမယျ”
”ခဈြကားကတဈစီးပဲရှိတော့တယျလျောရီကားပဲရတယျသှားမှာလားခဈြ” ”အငျးကိုရယျသှားရတော့မှာပေါ့စာခြုပျခြုပျတဲ့သူမအားတော့ရငျဘယျလိုလုပျမလဲဒီညပဲရတာနဲ့ပွနျရမှာပေါ့” ”ကနျြတဲ့ပစ်စညျးတှတေော့ကိုငယျလာရငျထညျ့ပေးလိုကျမယျတဲ့ခုတော့အဝတျနညျးနညျးနဲ့အရေးကွီးတာတှပေဲယူခဲ့တယျ” သို့သျောထိုကားပျေါတှငျဧပရယျသတိမထားမိသောအခကျြကွီးတဈခကျြရှိနသေညျကိုမသိခဲ့။ ကားပျေါရောကျမှပါလာသောခရီးသညျ၆ယောကျလုံးယောကျြားတှခေညျြးဖွဈနသေဖွငျ့ဧပရယျစိတျပူမိသညျ။ကားကခပျကြဲကြဲ။ ခေါငျမိုးပျေါတှငျကုနျတှအေပွညျ့တငျထားသျောလညျးကားကကွီးသဖွငျ့နရောလှတျတှမြေားနသေညျ။ ဧပရယျသူ့ဖကျသို့တိုး၍တိုးတိုးလေးမကျြနှာငယျလေးဖွငျ့ပွောမိသညျ။”အကိုယောကျြားတှခေညျြးပဲဧပရယျကွောကျတယျလမျးမှာတဈညလုံးနရေဦးမှာမိနျးမဆိုလို့ဧပရယျတဈယောကျတညျး” ဧပရယျပွောပုံကတုံတုံရီရီလေးနှငျ့အတျောလေးကွောကျနသေညျ့ဟနျ။ ”မကွောကျပါနဲ့ဧပရယျရယျကိုယျတဈယောကျလုံးရှိပါတယျ” ”အကိုလူတှကေဓားပွတိုကျမယျ့လူတှတေော့မဟုတျလောကျပါဘူးနျော” ခရီးသညျ၆ယောကျလုံးကအသကျ၃၀ကြျော၄၀၀နျးကငျြလူလတျပိုငျးအလုပျကွမျးသမားရုပျတှေ။
”မဟုတျပါဘူးကှာပုံစံကွညျ့ရတာရာဘာခွံအလုပျသမားတှနေမှောပါကွညျ့ပါလားအထုပျတှအေပိုးတှနေဲ့” ”အငျးအငျးဒါပမေယျ့သတိနဲ့နနေျောတဈကားလုံးယောကျြားတှခေညျြးပဲဧပရယျကွောကျတယျ” ”အေးပါကှာအေးပါကိုယျသတိနဲ့နပေါ့မယျ” ဧပရယျဒီမြှစိုးရိမျနတေော့ကောငျးကြျောမကျြမှနျနကျတပျပွီးငနဲတှကေိုအကဲခတျကွညျ့ရသညျ။ဘာပဲဖွဈဖွဈဧပရယျကခြောခြောလှလှ လေးမို့ထိုသူတှအေသညျးအသနျခပျရိုငျးရိုငျးကွညျ့နကွေတာတော့အမှနျ။မိနျးမမမွငျဖူးသူတှကေနြတောပဲ။စားမတတျဝါးမတတျနှငျ့။ ဒီတော့လညျးကောငျးကြျောအကွံထုတျရပွနျသညျ။ဒီလူတှနှေငျ့ညအထိနလေို့မဖွဈ။သို့သျောတခွားကားကလညျးမရှိ။ ဧပရယျကကိုယျ့ကိုယုံကွညျအားထားနသေညျမို့သူကလေးမှညျ့တဈပေါကျမစှနျးစဖေို့ကိုယျ့မှာတာဝနျအပွညျ့ရှိသညျ။ သူစိတျထငျလို့လားမသိ။ဟို၆ယောကျရဲ့ပုံစံကလညျးဘာတှနှေီးနှောတိုငျပငျနကွေသညျမသိ။
မကျြရိပျမကျြကဲတှပွေနသေလိုလို။ တီးတိုးစကားတှပွေောနသေလိုလို။ကောငျးကြျောမလိုသေးလိုသေးအကွံထုတျရတော့သညျ။ဒီလူတှနှေငျ့မမှောငျခငျခှဲမှပါပငျ။ ဒါပမေယျ့ကားကကုနျကားမို့တောကျလြှောကျမောငျးနလေိုကျတာ။အဲ…ဂိတျတှမှောတော့ရပျသညျ။ဂိတျတဈခုခုမှာတော့ဆငျးရမညျ။ အနညျးငယျမှောငျလာသညျအထိအခှငျ့မသာသေး။သတိနှငျ့အမွဲနနေရေသညျမို့ကောငျးကြျောအာရုံထဲမှာအန်တရာယျအငှအေ့သကျ တှခေံစားနရေသလိုလို။ကားပျေါမှလူ၆ယောကျအမူအယာကလညျးတဖွညျးဖွညျးကွမျးတမျးလာလိုကျတာလူစငျစဈမှဘီလူးသရဲဖွဈ တော့မိနှယျ။
ကားဒရိုငျဘာနှငျ့စပါယျယာကရော။သူတို့တှလေညျးအတူတူပဲလား။ကောငျးကြျောလကျသီးကိုကဈြကဈြပါအောငျဆုပျထားပမေယျ့ကြောရိုးထဲကစိမျ့တကျလာလိုကျတာငှကျဖြားတကျသညျ့နှယျ။ ဧပရယျကတော့ကောငျးကြျောလကျမောငျးကိုတငျးတငျးဆုပျထားသညျ။ယခုအခြိနျအားကိုးစရာကသူပဲရှိတယျလေ။ ကောငျးကြျောကိုယျကိုမတျမတျပွငျထိုငျလိုကျပွီးဧပရယျ့ပုခုံးကိုဖကျထားလိုကျသညျ။သူတို့လှုပျလှုပျရှားရှားဖွဈသညျကိုမွငျလြှငျ ကနျြလူမြားကလညျးမကျြခညျြမပွတျစောငျ့ကွညျ့နကွေသညျ။”ဘာဖွဈတာလဲဟေ့”လမျးတဈလြှောကျအတျောမှောငျလာသညျ့အပွငျလူနအေိမျခွလေညျးမရှိတာမို့ထိုသူတို့အတငျ့ရဲလာကွသညျ။
”ဟဲဟဲဒီကညီလေးတို့ကမင်ျဂလာဆောငျတာမကွာသေးဘူးထငျတယျဟဲဟဲညီမလေးကလညျြးောလညျးခြောခန်ဓာကိုယျလညျးလှဆို တော့ဟငျးဟငျးဟငျး””ကိုကွီးသာဆိုရငျတော့ညီမလေးလိုမိနျးမရရငျတဈညတညျးနဲ့သပြေျောပွီဟဲဟဲဟဲ” ဘာတှပွေောလို့ပွောနမှေနျးမသိ။ဧပရယျဂရုမစိုကျပဲမကျြနှာကိုတဈဖကျသို့လှညျ့ထားလိုကျသညျ။ကောငျးကြျောကတော့မကျြနှာပျေါဦးထုပျတငျကာအိပျခငျြယောငျဆောငျနရောမှခရီးပနျးထားသဖွငျ့မှေးကနဲအိပျပြျောသှားသညျ။ ကားကညနေ၎နာရီခှဲခနျ့တှငျစထှကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ကိုကလညျးအိပျပြျောနပွေီထငျသညျ။ဤကားပျေါတှငျပါလာသောသူ၆ယောကျ လုံးမှာအသကျ၃၀ကြျော၄၀ပတျဝနျးကငျြရှိယောကျြားကွီးမြားသာဖွဈပွီးကွုံရာကပြနျးလုပျကိုငျသူအလုပျကွမျးသမားမြားဖွဈဟနျရှိ သညျ။ထိုသူတို့ဧ။ျအသားအရမှောညိုမညျးခွောကျသှနေ့ပွေီးပုဆိုးတိုတိုမြားကိုသာဝတျထားကွသဖွငျ့ကွီးမား သနျမာသောခန်ဓာကိုယျကွီးမြားမှာကွှကျသားမွောငျးမြားပုံမကစြှာထှကျပျေါနသေညျ။
ထို့ပွငျဒရိုငျဘာနှငျ့စပါယျယာမှာလညျးကားစ ထှကျခြိနျမှစ၍တိုးတိုးတိုးတိုးနှငျ့ဘာတှပွေောနကွေမှနျးမသိ။တဈခါတဈရံတဟီးဟီးနှငျ့ရယျ၍ဧပရယျ့ကိုလှမျးကွညျ့သေးသညျ။ အခွား၆ယောကျမှာလညျးဧပရယျဧ။ျလှပဖွူဝငျးသောကိုယျလုံးကိုစားမတတျဝါးမတတျမီးတောကျနသေောမကျြလုံးမြားနှငျ့ကွညျ့နကွေ သညျ့အပွငျတဈခါတဈရံဧပရယျနှငျ့မကျြလုံးခငျြးဆုံမိပါကမကျြစိမှိတျပွခွငျး၊ရိုငျးရိုငျးပွပွမကွားတကွားပွောခွငျးတို့ကိုလုပျနကွေသဖွငျ့ ဧပရယျမှာကိုယျဟနျကိုတတျနိုငျသလောကျအလှမပျေါအောငျထိုငျရငျးစိတျကဉျြးကွပျနမေိသညျ။သို့သျောဧပရယျဘယျလိုနနေလှေပ လှနျးသောရုပျရညျနှငျ့ခန်ဓာကိုယျအလှကိုမဖုံးကှယျနိုငျ။ဧပရယျဝတျထားသညျကိုလညျးကွညျ့ပါဦး။ကွကျသှေးရောငျရငျဖုံးအင်ျကြီလကျပွတျခါးတိုလေးကိုတငျးယငျးစှာဝတျထားသဖွငျ့တဈခါတဈခါကိုယျခန်ဓာအလှုပျတှငျဖှေးဥ၍ရှရေောငျ ဝငျးနသေောခါးသားလေးကအင်ျကြီနှငျ့ထဘီကွားမှလကျနှဈဆဈခနျ့ပျေါပျေါသှားတတျသညျ။ထို့ပွငျအင်ျကြီသားမှာလညျးပါးလှာပြော့ ပွောငျးနသေဖွငျ့သခြောကွညျ့လြှငျရုနျးကွှဖောငျးအိနသေောရငျသားအစုံပျေါမှဘျောလီရငျပုံခှကျလေးကိုမွငျနရေသညျ။
ဘျောလီပျေါ မှပနျးကနုတျမြားကိုပါဖောကျထှငျးမွငျနရေသညျ့အပွငျဘျောလီအပွငျသို့လြှံထှကျနသေောတငျးယငျးလုံးဝနျးသညျ့ရငျသားစိုငျအခြို့ကို ပါအတျောထငျရှားစှာမွငျနရေသညျ။ဧပရယျဧ။ျလညျတိုငျကြော့ကြော့ဝငျးဝငျးလေးမှာလညျးစိနျဆှဲကွိုးအသေးတဈခုဆငျမွနျးထားရာ ဧပရယျဧ။ျအလှအပမြားမှာအန်တရာယျကိုဖိတျချေါနသေကဲ့သို့ရှိသညျ။ကားပျေါပါလာသူမြားကလညျးဧပရယျဧ။ျတငျးယငျးမို့မောကျသော ရငျသားမြား၊လုံးတငျး၍လိမ်မျောရောငျထဘီအပြော့လေးထဲမှတငျးယငျးစှာရုနျးကွှနသေောတငျသားမြား၊လုံးဝနျးဖွောငျ့စငျး၍ထဘီပြော့ အောကျမှကောကျကွောငျးအတိုငျးပျေါနသေောဧပရယျဧ။ျပေါငျတံလှလှနှဈခြောငျးတို့ကိုမကျြတောငျမခတျဟနျမဆောငျပဲကွညျ့ရငျး တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျဘာတှတှေတျထိုးနကွေသညျမသိ။
ဧပရယျမနတေတျတော့။ကိုကတော့ဧပရယျ့ဘေးတှငျမကျြနှာပျေါသို့ ဦးထုပျတဈလုံးတငျ၍အိပျမောကနြသေညျ။ယောကျြားကွီး၆ယောကျကမကျြတောငျမခတျတမျးပျေါတငျကွီးကွညျ့နကွေသဖွငျ့ဧပရယျ ကိုယျလုံးလေးကိုမောငျ့ဖကျသို့လှညျ့၍ထိုသူမြားကိုတစောငျးကြောပေးပုံစံမြိုးဖွဈသှားအောငျလှညျ့၍ရငျသားအလှကိုကှယျလိုကျသညျ။ သို့သျောထိုသို့လုပျလိုကျခွငျးကထိုသူမြားအတှကျမွငျကှငျးပိုကောငျးသှားစသေညျ။ဧပရယျဧ။ျတငျးယငျးနသေောကြောပွငျပျေါမှခြိတျ၇ခုတပျအသားရောငျဖြော့ဖြော့ဇာဘျောလီလေးကိုထိုသူမြားမွငျအောငျတမငျပွသကဲ့သို့ဖွဈနသေညျ။ ဧပရယျဧ။ျအင်ျကြီမှာပုံမှနျအတိုငျးရုတျတရကျကွညျ့လြှငျမသိသာသျောလညျးသခြောကွညျ့လိုကျပါကအတျောပါးသညျ။ အထဲမှအသားရောငျခြိတျ၇ခုတပျဇာဘျောလီလေးကိုအထငျးသားမွငျနရေသညျ့အပွငျဘျောလီခြိတျမြားကိုပါရမကျသှေးကွှဖှယျမွငျနရေသညျ။
ဧပရယျဧ။ျပွညျ့ဖွိုးသောပုခုံးသားလေးနှဈဖကျပျေါတှငျဘျောလီကွိုးလေးကအနညျးငယျနဈဝငျနရောထိုယောကျြားမြားအတှကျအလှနျကောငျးသောမွငျကှငျးဖွဈနသေညျ။ဘျောလီလေးကလညျးကပျြထုပျနသေညျ။ထို့ပွငျဧပရယျမှာခပျစောငျးစောငျးလေးဖွဈနသေဖွငျ့သေးသှယျသောခါးနှဲ့လေးမှာလိမျကဈြနပွေီးခါးသားဖွူဖွူနုနုလေးမှာရမ်မကျသှေး ကွှဖှယျလကျ၃လုံးစာခနျ့ပျေါနသေညျ။ထို့ပွငျဘေးတိုကျမွငျနရေသောတငျးအိနသေညျ့ရငျသားမြားမှာလညျးဘျောလီဝတျခဲ့၍သာတျော တော့သညျ။ဘရာစီယာသာဝတျခဲ့ပါကထိုယောကျြားမြားမညျသို့ဖွဈနမေညျမသိ။ဧပရယျဝတျထားသောဘျောလီမှာခြိတျ၇ခုပါသျော လညျးအခွားအမြိုးသမီးဝတျဘျောလီမြားနှငျ့ပုံစံဆငျတူသညျ။ဘျောလီကွိုးမှာအနညျးငယျသေးပွီးဘျောလီကိုအပါးစားပိတျခြောစအနု ဖွငျ့ပွုလုပျထားသညျ။ရငျပုံခှကျနရောသာအနညျးငယျထူသောပိတျရှိပွီးကနျြနရောမြားမှာခန်ဓာကိုယျတှငျတငျးယငျးစှာကပျနသေညျ။
ထို့ပွငျဧပရယျဧ။ျလုံးဝနျးဖှံ့ထှားသောတငျသားတလုံးမှာလညျးခုံပျေါမှအနညျးငယျကွှနသေဖွငျ့ပိတျပြော့ထဘီပါးလေးအောကျမှပငျတီ အရာလေးကိုထငျရှားစှာမွငျနရေသညျ။တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ကားပျေါမှယောကျြားမြားဧ။ျအပွုအမူမြားမှာရိုငျးသထကျရိုငျးလာသညျ။ မှောငျလာသညျ့အပွငျလမျးဘေးတှငျအိမျခွတေဈခုမှမရှိသဖွငျ့ထိုသူတို့အတငျ့ရဲလာကွသညျ။ ဧပရယျဧ။ျဘေးတိုကျမွငျရသောခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးမွငျကှငျးကလညျးကောငျးလှနျးနသေညျ။ရငျသားအစုံကရှကေို့လုံးဝနျးစှာ ကော့ထှကျနပွေီးသေးသှယျခပျြရပျသောဝမျးဗိုကျသားနှငျ့ခါးကဉျြကဉျြလေး။ထိုအောကျမှရဖွေညျ့ထားသညျ့ပူစီဖောငျးမြားလိုလုံးကော့ နသေညျ့တငျစိုငျတငျးတငျးအိအိကွီးမြားကထိုသူတို့အားစိတျရိုငျးမြားအစှမျးကုနျဝငျစသေညျမှာမဆနျးပါ။
ကူလီတဈဦးကဧပရယျကောငျးစှာကွားနိုငျသောအသံဖွငျ့”တောကျအိုးကွီးတှကေတငျးနတောပဲကှာလိုးလိုကျရရငျတော့”ဟုသူ့ဘေး မှလူကိုလှမျးပွောပွီးဧပရယျကိုပွီတီတီလှမျးကွညျ့သညျ။ဧပရယျဧ။ျပနျးနုရောငျနှုတျခမျးလေးနှဈလှာမှာကွောကျရှံ့မှုနှငျ့ရှကျမှုကွောငျ့ တဆတျဆတျတုနျနသေညျ။မဖွဈတော့။ကို့ကိုနိုးရတော့မညျ။”ကိုကိုရထေပါဦး””အငျးအငျးခဈြဘာလဲ””ဘယျနရောရောကျနပွေီလဲမသိဘူးကားပျေါမှာလညျးယောကျြားတှခေညျြးပဲခဈြ ကွောကျလာပွီကားပွောငျးလို့ရရငျပွောငျးစီးရအောငျနျောကို””အာာခဈြကလညျးဒီအခြိနျကွီးဒီနရောမှာဘယျလိုကားပွောငျးစီးမှာ လဲ”ထိုစဉျတှငျပငျစပါယျယာက”ဟားဟားငါတို့အခဈြလေးဘာတှတေိုးတိုးတိုးတိုးပွောနတောလဲမသိဘူးငါတို့ကိုလညျးပွောမှပေါ့” ဟုအျောပွောလိုကျသညျ။ဧပရယျရောကောငျးကြျောပါစပါယျယာစကားကိုမကွားသလိုနရေငျးအကွံထုတျနကွေသညျ။
ထိုသူတှဧေ။ျရနျမှလှတျအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲ။ကောငျးကြျောအကွံထုတျနသေညျ။ ဧပရယျကလညျးခြောခြောလှလှလေးမို့ထိုသူတှမေိနျးမမမွငျဖူးသလိုကွညျ့နကွေသညျကတော့အမှနျပငျ။ ဒီကားပျေါမှာတော့ဆကျစီး၍မဖွဈတော့။ကားကအဝေးပွေးလမျးပျေါတှငျမဟုတျတော့။ဘယျအခြိနျတညျးကလမျးကွောငျးပွောငျးသှား သညျမသိ။သဈပငျမြားကွားမှဖုနျထူထူမွလေမျးပျေါတှငျမောငျးနသေညျ။ဧပရယျရောကောငျးကြျောပါဘယျရောကျနမှေနျးမသိကွ။ ”ကားဆရာကားဆရာခဏရပျပေးပါဦးကြှနျတေျာ့အမြိုးသမီးအပေါ့သှားခငျြလို့”လကျမထပျရသေးသျောလညျးပွသနာမြားကိုလြော့ သှားစခေငျြသဖွငျ့အမြိုးသမီးဟုသုံးနှုနျးလိုကျသျောလညျးထိုသူမြားကနောကျဆုတျမညျ့ပုံမပျေါ။ ”ဟားဟားရပျပေးရမှာပေါ့ရပျပေးရမှာပေါ့ဟီးဟီး” ”မွနျမွနျကိစ်စရှငျးခဲ့ဟီးဟီးးခငျဗြားမိနျးမကခြောတယျတောငျ့တယျနျောဟီးးးခငျဗြားကံကောငျးတာပဲညတိုငျးဟီးးးဟဲဟဲ” ကာဆရာကအကွောငျးမရှိပဲတဟီးဟီးရီနသေညျ။
အခွားယောကျြားမြားကလညျးပွုံးစိစိနှငျ့။”ကဲငါတို့ပူတူတူးလေးကရှူရှူးပေါကျခငျြ လို့တဲ့ဟားဟားပေါကျပါစပေေါကျပါစေ”ဧပရယျတဈခကျြမကျြစောငျးထိုးကွညျ့မိသညျ။”ဟားးခဈြလေးကမကျြစောငျးထိုးရငျပိုလှ” ”ကဲကဲသှားစရာရှိတဲ့ကိစ်စတှလေညျးသှားထားကွသှားထားကွဟငျးဟငျးအလုပျလုပျဖို့ကနျြသေးတယျ” ”ဟငျးဟငျးကိုယျ့လူတို့အစာစားဖို့ပွငျထားကွဟငျးဟငျး” ဟငျးမဖွဈတော့ကာမဘီလူးတှဧေ။ျကားကိုစီးလာမိပွီ။ ဧပရယျနှငျ့ကောငျးကြျောထိုသူမြားကိုမကွားယောငျပွု၍ကားပျေါမှဆငျးလာကွသညျ။အထုပျမြားကိုမူကားပျေါတှငျပငျထားခဲ့ကွသညျ။
”ကိုခဈြတို့ခဈြတို့ဘယျလိုလုပျကွမလဲဟငျ””အငျးခဈြကိုယျတို့ထှကျပွေးကွရအောငျအထုပျတှကေားပျေါမှာဆိုတော့ကိုတို့ပွေးမယျ လို့ထငျကွမှာမဟုတျဘူး””ကိုဘယျနရောရောကျနမှေနျးမမသိတာလမျးမလညျးမတှဘေူ့းတောကွီးထဲမှာဘယျသှားကွမှာလဲ” ”အငျးဒီညတော့တောထဲမှာပဲဖွဈသလိုနရေတော့မှာပေါ့ခဈြရယျမကွောကျပါနဲ့ကိုယျတဈယောကျလုံးရှိပါတယျနောကျနမေ့နကျမှ ကားတဈစီးစီးကိုအကူအညီတောငျးပွီးသှားကွတာပေါ့”ကောငျးကြျောနှငျ့ဧပရယျတို့ခွဦေးတညျ့ရာပွေးလာကွသညျ။
သို့သျောလူသှားလမျးအတိုငျးပွေးမိနကွေသညျကိုနှဈယောကျလုံးသတိ မထားမိ။”ကိုခဈြမောလာပွီနောကျကလိုကျမလာတော့ဘူးခဏနားကွရအောငျ” ”ဟြောငျဆျောကွီးကအလနျးကွီးနျောငါတို့တော့ပှတာပဲ””အေးပွနျလာမှယောကျြားကိုခြုပျပွီးမိနျးမကိုကောငျးကောငျးလိုးပေးရမယျ’ ”ဟြောငျ၈ယောကျလိုးတာခံနိုငျမှာလား””ဒီလောကျတောငျ့တဲ့ဆျောခံနိုငျမှာပေါ့မခံနိုငျဘူးဆိုမငျးကမလုပျပဲနမှောလား” ”တောကျသူဌေးသမီးလေးထငျတယျဖွူဖှေးနတောပဲလိုးလိုကျရလို့ကတော့” ”ဟာလုပျမှာပေါ့လီးဒီလောကျခြောတဲ့နတျသမီးလေးကိုဘယျကောငျမလိုးပဲနမေလဲ””တောကျငါတို့တော့ဆှမြေိုးမတေ့ော့မှာကှဟားဟားဆျောလေးကဖှေးပွီးသနျ့နတောပဲပစ်စညျးတှကေလညျးတငျးယငျးနတောပဲ” ”အေးကှဘျောလီကွိုးတှဆေိုတငျးနတောပဲဘျောလီကွိုးနှဈခြောငျးဆှဲပွီးလိုးလိုကျရလို့ကတော့ဟငျးဟငျး”
”ဖငျတှကေလုံးပွီးအိနတောကှလေးဖကျထောကျခိုငျးပွီးဖငျခရြမယျ””ဟြောငျ၁၅မိနဈတောငျရှိနပွေီပွနျမလာသေးဘူး””အိတျတှထေားခဲ့တာပဲဖှငျ့ကွညျ့စမျး” ”ဟဘျောလီလေးတှဟေမှေးနတောပဲဟားဟားပငျတီတှကေလညျးမှေးနတောပဲကှ” ”ဟာဟြောငျငါတို့တော့ပှပွီပိုကျဆံအိတျထဲမှာတဈသောငျးတနျတှအေပွညျ့ပဲ””အေးမငျးတို့အဲဒါပဲမကျနဟေိုဟာမကပွေးပွီလားမသိဘူး” ”လီးတယျလှတျသှားဦးမယျဟြောငျအခွအေနတေဈခကျြသှားကွညျ့ဦး” မာလကအုပျစုထဲမှတဈယောကျကိုအခွအေနကွေညျ့ရနျလှတျလိုကျသညျ။ ”ဟမတှတေ့ော့ဘူးပွေးပွီထငျတယျ” ”တောကျလီးပဲလီးလုပျနကွေတာလားလိုကျရှာကွလေ” ”အေးလိုကျရှာမယျ” ”တောကျလှတျသှားပွီထငျတယျကှာ””အဝေးကွီးမရောကျလောကျသေးဘူးသခြောရှာမယျလူဖွနျ့ရှာမယျတှရေ့ငျဝီစီမှုတျလိုကျ” ”ငါလိုးပဲကှာငါတို့တော့ငတျပွနျပွီထငျတယျ””တောကျစားရခါနီးမှကှာလီးပဲ” မာလတို့မှာနာရီဝကျခနျ့ရှာသျောလညျးမတှကွေ့သဖွငျ့လှတျသှားနှမြောတသတောကျတခေါကျခေါကျဖွဈနကွေတော့သညျ။
”ဟာဟြောငျတှဒေီမှာမွကျတှကေိုလူတိုးထားတယျလမျးကွောငျးအတိုငျးကားနဲ့လိုကျကွမယျတကျကွသူတို့ရှာရောကျသှားရငျ ငါတို့ငတျပွီကှ” ”တောကျဟြောငျတှလေီးပဲနာရီဝကျလောကျတောငျရှိနပွေီမတှသေ့ေးဘူးလီးပဲကှာ” ”အေးကှာရှာဖကျရောကျသှားလောကျပွီတောကျဆျောကအလနျးစားကွီးကှာတောကျ” ”လီးဟြောငျတှမေရှာနဲ့တော့ဆကျသှားမယျခဏနရေဲသှားတိုငျမှရဲတှလေိုကျလာဦးမယျလာသှားမယျ”မာလတို့မှာစားရကာနီးမှကပျလှတျသှားသဖွငျ့မကမြေနပျဖွဈကာအခငျြးခငျြးဆဲဆိုနကွေသညျ။ ”တောကျကားဆီကုနျတာပဲအဖတျတငျတယျ” ”လီးလားငါတို့မှမတှတေ့ာဘာတတျနိုငျမှာလဲ” ”ဟာဟြောငျတှရှေမှေ့ာနှဈယောကျလိုကျလိုကျမွနျမွနျမောငျး” ”ဟငျကိုကိုနောကျမှာလိုကျလာကွပွီထငျတယျ””တောကျလူမဆနျတဲ့ကောငျတှခေဈြလာပွေးရအောငျ” ”ဟာရှမှေ့ာပွေးပွီလိုကျလိုကျ”ဧပရယျနှငျ့ကောငျးကြျောမှာခြုံပုတျမြားထဲသို့ပတျပွေးသျောလညျးနောကျမှကားဖွငျ့လိုကျသဖွငျ့ လှတျနိုငျခွအေလှနျနညျးနသေညျ။
”ဟားဟားမိပွီခဈြလေးကမပွောမဆိုနဲ့ဘယျထှကျသှားတာလဲ” ”ခငျဗြားတို့မိုကျရိုငျးလှခညျြလားဒါကြုပျမိနျးမဗြ”ကောငျးကြျောကအနီးရှိထငျးခြောငျးတဈခြောငျးကိုကောကျဆှဲလိုကျသညျ။ ”ဟြောငျတှစေလိုကျရအောငျ”ကောငျးကြျောမှာလူရညျသနျ့တဈဦးသာဖွဈပွီးငယျစဉျကစ၍ရနျမဖွဈဖူးခဲ့သဖွငျ့လူ၎ယောကျဧ။ျဝိုငျးဝနျး ထိုးကွိတျရိုကျနှကျခွငျးကိုမခံနိုငျ။”ဟြောငျတှဒေီကောငျ့ကိုကွိုးတုပျထားစမျးဘောငျးဘီခြှတျထားလိုကျ””ဟားဟားမာလဘာလုပျ မလို့လဲဟြောငျ့””ငါလိုးမမေးမနနေဲ့မွနျမွနျခညျြစမျး”မာလဆိုသူဒရိုငျဘာကပွောလိုကျသညျနှငျ့အခွားသူမြားမှာစောဒကမတကျကွ တော့။ကောငျးကြျောအားပါးစပျထဲသို့အဝတျစမြားထိုးထညျ့၍ပါးစပျကိုအဝတျစီးကာသဈပငျတှငျခညျြထားလိုကျသညျ။
”ဟဲဟဲခဈြလေးကိုယျတို့ကခဈြလေးကိုဘာမှမလုပျပါဘူးခဈြလေးအပေါကျထဲကိုယျတို့လီးပဲထညျ့မှာပါဟဲဟဲ””ခဈြလေးရဲ့အပေါကျထဲကိုကိုယျတို့လီးခြောငျးတှထေညျ့ပွီးလိုးရုံပဲဟဲဟဲခဈြလေးလညျးအကြိုးမယုတျကိုယျတို့လညျးဖီးရှိဟဲဟဲ” ”ရှငျရှငျတို့လူစိတျမရှိကွဘူးလားဟငျ့ဟငျ့လှတျပါကြှနျမကိုလှတျဟငျ့ဟငျ့” ကောငျးကြျောမှာမိမိဧ။ျဇနီးလောငျးလေးကိုထိုသူ၈ယောကျဘာလုပျတော့မညျကိုသိသဖွငျ့သာမနျအရှယျလီးမှာတောငျမတျနသေညျ။ မာလဆိုသူကကားကိုကောငျးကြျောရှတေ့ညျ့တညျ့တှငျဖငျထိုးလိုကျပွီးအျောဟဈရုနျးကနျနသေောဧပရယျကိုဆှဲချေါလာကွသညျ။ ဧပရယျမှာဘာအဝတျမှမခြှတျရသေးသျောလညျးအဝတျအစားမြားမှာဖရိုဖရဲဖွဈနသေညျ။ သေးကငျြလှနျးလှသောခါးလေးအောကျမှလုံးတငျးပွီးပွညျ့ဖောငျးလှသောဧပရယျ့အိုးကွီးနှဈလုံးမှာခွလှေမျးတိုငျးတှငျတဈခကျြ ခငျြးတုနျခါနသေညျ။
လှပဖူးရှနသေောမကျြနှာလေးမှာငိုယိုရုနျးကနျနသေဖွငျ့မဲ့နသေျောလညျးခြောဆဲ။ ”ဟြောငျတှဒေီစျောကွီးကိုငါကော့ပြံသှားအောငျကိုငျပွမယျမငျးတို့တှကေောငျးကောငျးကွညျ့ပွီးပညာယူကွငါပွီးရငျမငျးတို့အလှညျ့ ပေါ့ဟိုကောငျခကျြကွီးဗီဒီယိုရိုကျထားစမျး””ဟငျ့ဟငျ့မမလုပျကွပါနဲ့ရှငျရှငျတို့လိုခငျြတာယူသှားကွပါဟငျ့ဟငျ့” မာလဆရာဝနျမခြောလေးဧပရယျအားစလုပျတော့သညျ။”ဟြောငျတှငေါတဈယောကျတညျးနိုငျတယျမငျးတို့ဟိုနားကနကွေညျ့ကွ” အခွားသူမြားမှာလညျးထိနျးမရသောတဏှာမကျြလုံးမြားဖွငျ့ကွညျ့နကွေသညျ။
မာလအပါအဝငျထိုသူမြားဧ။ျကိုယျတှငျအဝတျမရှိတော့ သဖွငျ့မတောငျ့တတောငျဖွဈနသေောလီးမြားတောငျမတျနသေောလီးမြားမှာမညျးမညျးတုတျတုတျဖွငျ့ထိုးထောငျနကွေသညျ။ ကားဘကျထရီဖွငျ့၂ပမေီးခြောငျးမှာထိနျလငျးနရောမွငျကှငျးကိုပွတျသားရှငျးလငျးစှာမွငျနရေသညျ။”ဟငျ့ရှငျလူယုတျမာလှတျလှတျဟငျ့ကယျကွပါဦးရှငျကယျကွပါဦးကြှနျမကိုမတရားကငျြ့နကွေပါတယျ” ”ဖွနျးဖွနျးအငျ့ဟငျ့မငျးအျောလို့လညျးဒီတောထဲမှာဘယျသူကွားမှာလညျးဒီလောကျအျောခငျြတဲ့ကောငျမအျောအောငျကိုလိုးပေး ဦးမယျ”မာလကရုနျးကနျနသေောဧပရယျအားကားပျေါမှခထြားသညျ့စားပှဲခုံပျေါတှငျကိုယျတဈပိုငျးဖိ၍ကုနျးခိုငျးထားသညျ။ ”ကောငျမရာမငျးလညျးယောကျြားရှိတာပဲအေးဆေးခံစမျးပါမငျးလညျးခံဖူးနတောပဲကိုစောကျပိုမလုပျနဲ့ဖွနျးးးးးး” ”မငျးစောကျဖုတျထဲလီးတဈခြောငျးဝငျထားပွီးပွီပဲနောကျထကျထပျဝငျလို့မငျးအတှကျဘာမှအကြိုးမယုတျသှားဘူးဟဲဟဲဟဲ” အပြိုမခြောလေးဧပရယျကတော့မကွားဝံ့မနာသာစကားမြားကိုမခပြေနိုငျပဲအားကုနျရုနျးကနျနရေသညျ။
မာလဧ။ျလီးတံကွီးမှာဧပရယျဧ။ျလုံးဝနျးတငျးယငျးနသေောဖငျနှဈလုံးကွားတှငျအမွောငျးလိုကျဖိဝငျနသေညျ။ဧပရယျမှာရုနျးကနျနသေ ဖွငျ့မာလဧ။ျပေါငျခွံအားဖငျဖွငျ့ဖိပှတျပေးသလိုဖွဈနသေညျ။မာလကဧပရယျဧ။ျနို့အုံတငျးတငျးနှဈအုံကိုမိမိရရကိုငျညှဈပေးသညျ။ ဧပရယျမှာသနျမာသောယောကျြားကွီးဧ။ျဖိခြုပျထားခွငျးခံနရေသဖွငျ့ဘယျလိုမှမလှတျနိုငျ။မာလကဧပရယျဧ။ျဖငျနှဈလုံးအားအပွငျမှ လီးဖွငျ့ဖိညှောငျ့ပေးရငျးတငျးရငျးလှပသညျ့ဧပရယျဧ။ျနို့အုံနှဈအုံကိုလညျးဆုပျခသြေညျ။သူစိမျးယောကျြားအလုပျကွမျးသမားကွီးမြား ဧ။ျသားမယားပွုကငျြ့ခွငျးခံရတော့မညျကိုသိသဖွငျ့ဧပရယျစိတျမပါသျောလညျးသဘာဝအရပနျးလေးထဲမှအရညျအနညျးငယျစီးကလြာ သညျ။
”ရှိးးးနို့တှကေတငျးနတောပဲမငျးလိုအရှယျကောငျးမိနျးမခြောခြောတှကေိုငါအမွဲမှနျးပွီးလိုးနရေတာရှိးးးအိုးးဖငျတှကေလညျး တငျးအိနတောပဲမငျးကိုဖငျလညျးလိုးပေးရမယျ””ဟငျ့ရှငျတို့တှလေူစိတျမရှိကွဘူးလားဟငျ့ဟငျ့လှတျပါကြှနျမမှာယောကျြားရှိပါ တယျဟငျ့ဟငျ့””ရှိးးးးနို့တှကေကိုငျလို့ကောငျးလိုကျတာမငျးယောကျြားလညျးဟိုမှာတှလေ့ားလီးတောငျနပွေီငါတို့ကမငျးယောကျြား လိုးတာထကျ၁၀ဆကောငျးအောငျလိုးပေးမှာဟားဟား””ဟငျ့ဟငျ့မလုပျကွပါနဲ့ရှငျ” ”ဟားဟားဟြောငျတှမေယားကိုမုဒိမျးကငျြ့မှာကိုလငျကလီးတောငျနတေယျကှဟားဟားကွညျ့ကွစမျး” မာလကဧပရယျဧ။ျ
ခါးနှဲ့လေးကိုလကျတဈဖကျဖွငျ့ခြုပျထားရငျးနောကျမှမှနျမှနျလေးညှောငျ့ပေးနသေညျ။ဧပရယျကားရုနျးကနျဆဲ။ ဧပရယျဧ။ျခါးတိုအင်ျကြီနှငျ့ထဘီကွားမှလကျ၎လုံးခနျ့ပျေါနသေောခါးသားမှတျမှတျလေးမြားမှာနူးညံ့လှသညျ။ ”ဖွုတျဖောကျဖောကျ”မာလကဧပရယျဧ။ျနူးညံ့ဝါဝငျးနသေောလညျတိုငျလေးကိုစုပျရကျရငျးဧပရယျဧ။ျရငျဖုံးအင်ျကြီနှိပျသီးမြားကိုတဈ လုံးခငျြးဖွုတျသညျ။၃လုံးခနျ့ဖွုတျပွီးသောအခါမာလဆကျမဖွုတျတော့။ဝါဝငျးနုအိပွီးဘျောလီထဲမှလြှံထှကျနသေောရငျညှနျ့လေးကို လကျကွမျးကွီးဖွငျ့ပှတျပေးသညျ။နို့သီးခေါငျးမြားကိုမနှိုကျသေး။အောကျကလညျးလီးဖွငျ့ဧပရယျဧ။ျဖငျနှဈလုံးကွားသို့ပုံမှနျလေးတဈ ခကျြခငျြးညှောငျ့ပေးလိုကျလီးဖွငျ့ဖိပှတျလိုကျလုပျပေးနသေညျ။အမှနျကမာလဧပရယျအားခကျြခငျြးအဝတျမြားခြှတျ၍တကျလိုးလို့ရ သညျ။သို့သျောတဈဆငျ့ခငျြးသှားခွငျးဖွငျ့ပိုမိုရငျခုံစရာကောငျးပွီးဧပရယျကိုလညျးစိတျကွှလာအောငျလုပျလိုသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ ဧပရယျဧ။ျနုအိလှသောရှအေိုရောငျနို့အုံလေးတဈအုံမှာတဈခွမျးနီးပါးပငျပျေါနပွေီ။နို့သီးခေါငျးဖုံးရုံသာရှိတော့သညျ။
မာလကဧပရယျဧ။ျဘျောလီရငျပုံခှကျလေးအားဖွညျးဖွညျးလေးညှဈလိုကျအင်ျကြီပျေါမှဧပရယျဧ။ျနို့နှဈလုံးကိုခပျကွမျးကွမျးညှဈပေး လိုကျဖွငျ့ဧပရယျအားစိတျဆှနသေညျ။”အအဟငျ့ဟငျ့မလုပျပါနဲ့”ဧပရယျဧ။ျရုနျးကနျမှုမြားအားလြော့လာသညျ။ ဧပရယျဧ။ျမှေးပြံ့နသေောရနံ့သငျးသငျးလေးကမာလဧ။ျလီးကို၉၀ဒီဂရီတောငျမတျလာစသေညျ။ ”ဟဲဟဲ….ဒီထဲကဘာတှလေညျးဟအိစိအိစိနဲ့….ဟဲဟဲဟဲ….ကွညျ့ရအောငျ” ဧပရယျ့နို့အုံမြားမှာတငျးယငျးအိထှေးနသေညျ။ ”မှနျးစမျး…ဟဲဟဲ…ကြှဲကောသီးတှလေား…ဟဲဟဲဟဲ” ”ဟို…ရှငျရှငျ…ကြှနျမအသားကိုမ…မထိနဲ့…..ဟငျ့ဟငျ့…လူယုတျမာ” မာလကဧပရယျဧ။ျအင်ျကြီနှိပျသီးမြားအားလုံးကိုဖွုတျလိုကျပွီးအင်ျကြီဆှဲခြှတျသညျ။ဧပရယျမှာအင်ျကြီအခြှတျမခံပဲအတငျးဆှဲ၍ရုနျးသညျ။ သို့သျောမာလကဧပရယျဧ။ျဘျောလီထဲသို့လကျနှိုကျ၍နို့သီးခေါငျးလေးကိုဆှဲလိမျလိုကျသညျ။
”အားးအအဟငျ့” ဧပရယျခေါငျးလေးမော့ပွီးခါးလေးကော့သှားသညျ။မာလကဧပရယျဧ။ျလကျနှဈဖကျကိုစားပှဲပျေါသို့အရှညျလိုကျစုခြုပျ၍တငျလိုကျသညျ ထို့နောကျဧပရယျဧ။ျအင်ျကြီအားအောကျမှစ၍လှနျတငျလိုကျသညျ။ဖွူဝငျး၍ရှရေောငျတောကျနသေောအတှငျးသားလေးမြားပျေါလာ သညျ။ထဘီအထကျဆငျစလေးမှာဖွူဝငျးနှဲ့ပွောငျးသောခါးလေးပျေါတှငျတငျးယငျးစှာပတျထားသညျ။ကားစှငျ့လုံးဝနျးသောဧပရယျ ဧ။ျဖငျနှဈလုံးမှာတငျးကပျြသောထဘီအပြော့လေးအောကျမှရုနျးကွှနသေညျ။မာလကဧပရယျဧ။ျ
အင်ျကြီအားပုခုံးနားထိလှနျတငျလိုကျ သညျ။တငျးယငျးနသေောအသားရောငျဇာဘျောလီလေးမှာဧပရယျဧ။ျကြောပွငျပျေါတှငျတငျးနသေညျ။နူးညံ့သောပိတျခြောစဖွငျ့ လုပျထားသဖွငျ့ဘျောလီမှာတငျးပွီးအသားတှငျကပျနသေညျ။မာလကဧပရယျဧ။ျတငျးနသေောဘျောလီခြိတျမြားကိုတပျမကျစှာကိုငျ ကွညျ့သညျ။မာလကအင်ျကြီကိုဆှဲခြှတျသျောလညျးဧပရယျကတငျးခံနသေဖွငျ့ခြှတျမရ။”ဖွောငျးဖွနျးအငျ့ဟငျ့ဟငျ့” ”ကောငျမအင်ျကြီခြှတျဖို့ငွိမျငွိမျနစေမျး”မာလကဧပရယျဧ။ျဖွူနုသောလညျကုပျလေးကိုနှဈခကျြဆငျ့ရိုကျလိုကျသညျ။အားပါလှနျးသဖွငျ့ ဧပရယျမရုနျးရဲတော့။မာလကဧပရယျဧ။ျအင်ျကြီအားဆှဲခြှတျ၍ကားပျေါပဈတငျလိုကျသညျ။ဧပရယျမှာအပျေါပိုငျးတှငျဘျောလီလေးတဈ ထညျသာရှိတော့သဖွငျ့အတှငျးသားမြားမှာအတျောပငျပျေါနသေညျ။ဖွူဝငျး၍လုံးတငျးနသေောဧပရယျဧ။ျစံခြိနျမှီနို့နှဈလုံးမှာဘျောလီ ထဲမှ၃ပုံ၁ပုံခနျ့လြှံထှကျနသေညျ။
ဧပရယျဧ။ျဖွူနုသောလညျတိုငျတှငျဆှဲထားသညျ့ပလကျတီနမျဆှဲကွိုးလေးမှာရငျသားနှဈမှာကွားသို့ ရောကျနသေညျ။ပွောလြှငျယုံမညျမဟုတျ။ကောငျးကြျောမှာဧပရယျအားသမီးရီးစားဘဝတှငျအခှငျ့အရေးမယူခဲ့သလိုစစေ့ပျပွီးသညျ မှစ၍ယခုအထိဧပရယျ့နို့မြားကိုလုံးဝမမွငျဖူးသေး။အင်ျကြီကယျြသီးပငျမဖွုတျဖူးသဖွငျ့ဧပရယျ့ကိုယျအပျေါပိုငျးကိုဘျောလီခံလကျြပငျ မမွငျဖူး။ဧပရယျဝတျထားသောဘျောလီမှာအကောငျးစားဇာဘျောလီပုံဆနျးလေးဖွဈသညျ။ခြိတျ၇ခုပါသျောလညျးခါးကတိုသညျ။ ထို့ပွငျအသားတှငျကှကျတိကပျနသေညျရှအေိုရောငျဝငျးနသေောဧပရယျ့ရငျအစုံမှာဘျောလီထဲမှလြှံထှကျနသေညျ။ ကောငျးကြျောကမူဧပရယျ့အားရှလေိုဥ၍ယုယထားသူခပျညံ့ညံ့ယောကျြားသာဖွဈသညျ။
ဧပရယျမှာယခုထိတိုငျအောငျ အပြိုစငျစဈစဈလေးအဖွဈရှိနဆေဲဖွဈသညျ။ယခုတော့မိမိပငျယုယုယယထားသညျဇနီးလောငျးလေးအားမုဒိမျးသမားမြားကသားမယားပွုကငျြ့ကွတော့မညျ။ မာလကဧပရယျအားဘာမှမလုပျသေးပဲဘျောလီပျေါမှနို့ကိုငျလိုကျအောကျမှဖငျကိုညှောငျ့ပေးလိုကျဖွငျ့နှူးနှပျနသေညျ။ ဧပရယျဧ။ျမှေးပြံ့သောလညျကုပျလေးနှငျ့လညျတိုငျကြော့ကြော့လေးတို့ကိုအားရအောငျစုပျရကျပေးသညျ။ထို့နောကျကုနျးရကျ သားဖွဈနသေောဧပရယျဧ။ျထဘီပြော့ပျေါမှနေ၍နောကျသို့ပွူးထှကျနသေောပနျးလေးကိုအုပျကိုငျ၍ပှတျဆှဲပေးလိုကျသညျ။ ”အအရှိးးးအအဟငျ့”ဧပရယျကော့ပြံသှားသညျ။ထို့နောကျမှကွိုးတုပျခံထားရသောယောကျြားကိုသတိရ၍အတငျးရုနျးပွနျသညျ။ ဧပရယျမှာကာမဆိပျမြားတကျနပွေီဖွဈသျောလညျတဈသကျလုံးအိနွေ်ဒသိက်ခာဖွငျ့နလောသဖွငျ့အားကုနျရုနျးနသေညျ။
”ငွိမျငွိမျနကေောငျမမငျးစောကျဖုတျယားနပွေီမဟုတျလားငါတို့ကမငျးကိုကောငျးအောငျလိုးပေးမှာငွိမျငွိမျခံစမျး”ဆရာဝနျမလေး ဧပရယျမှာတဈသကျနှငျ့တဈကိုယျကောငျးကောငျးမကွားဖူးခဲ့သောစကားမြားကိုနားမဆံ့အောငျကွားနရေသဖွငျ့ရမ်မကျသှေးမြား အတျောကွှလာသညျ။သို့သျောတဈသကျလုံးမာနရှငျလေးအဖွဈနလောခဲ့သဖွငျ့ခန်ဓာကိုယျကိုမုဒိမျးသမားမြားလကျသို့မအပျခငျြ။ မာလကရုနျးကနျနသေောဧပရယျဧ။ျလကျနှဈဖကျကိုနောကျပွနျခြုပျထားပွီးထဘီစကတျခြိတျလေးကိုဖွုတျခလြိုကျသညျ။ သို့သျောဧပရယျ့ထဘီစကတျမှာဒေါကျမြားနှငျ့အံကိုကျခြုပျထားပွီးခါးအထကျနားမှခြိတျပွုတျသှားသျောလညျးရှဘေ့ကျမှခြိတျတဈခု ရှိနသေေးသဖွငျ့ထဘီမှာကပိုကရိုဖွဈသှားသျောလညျးမကြှတျသေး။တငျးတငျးယငျးယငျးပငျရှိနသေေးသညျ။ မာလကဧပရယျအားရှမှေ့ခြိတျဖွုတျရဦးမညျကိုမသိသဖွငျ့ဒီအတိုငျးခြှတျဖို့ကွိုးစားသညျ။
ဧပရယျ့ထဘီထဲလကျကိုမရရအောငျလြှို၍ဖငျသားနှဈလုံးကိုကိုငျ၍ထဘီကိုတှနျးခြှတျသညျ။ဖောကျခနဲမွညျသံနှငျ့အတူထဘီရှခြေိ့တျ ပွုတျသှားပွီးတငျးအိလုံးဝနျးလှသောဧပရယျ့ဖငျသားကွီးမြားမှဇာပငျတီအပြော့လေးသာခံ၍ပျေါလာတော့သညျ။ ဧပရယျမှာအတငျးရုနျးသျောလညျးမရတော့။ဧပရယျဧ။ျထဘီလေးမွကွေီးပျေါသို့ပုံကသြှားပွီးဖွူဝငျးခြောမှတျနသေညျ့ပေါငျတံလုံးလုံး လေးနှဈခြောငျးပျေါလာသညျ။ယခုအခါဧပရယျဧ။ျကိုယျတှငျအသားရောငျဘျောလီနှငျ့အသားရောငျပငျတီလေးသာကနျြတော့သညျ။ မာလကဖွူနုသညျ့ဧပရယျဧ။ျဝမျးဗိုကျသားခပျြခပျြလေးကိုကိုငျ၍ဖကျလိုကျပွီးလီးကိုဧပရယျဧ။ျဖငျကွားသို့ပိုကပျထားလိုကျသညျ။ ဧပရယျမှာရုနျးကနျရလှနျးသဖွငျ့မောဟိုကျနသေျောလညျးဆကျလကျရုနျးကနျနသေညျ။
မာလကဧပရယျဧ။ျလုံးဝနျးအိစကျဖှံ့ထှားသော တငျသားအိအိတငျးတငျးကွီးနှဈလုံးကိုဖွနျးကနဲဖွနျးကနဲ၃ခကျြခနျ့ဆငျ့ရိုကျလိုကျပွီးပငျတီကိုဆှဲဖွဲ၍လှငျ့ပဈလိုကျသညျ။ မာလမှာဧပရယျ့အရငျအိမျထောငျရှိအမြိုးသမီးခြောလေး၃ယောကျကိုမုဒိမျးကငျြ့ဖူးသျောလညျးတဈယောကျမှဧပရယျလောကျမခကျ။ ဧပရယျ့ခမြာမှာတော့သူစိမျးယောကျြားကွီးမြားရှတှေ့ငျဖငျဟောငျးလောငျးနှငျ့ကုနျးနရေသဖွငျ့ရှကျလညျးရှကျကွောကျလညျးကွောကျ သညျ။အရေးထဲမာလဧ။ျလကျကွမျးကွီးရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖွဈနသေောဧပရယျ့စအိုဝနီနီရဲရဲလေးကိုဖွဲ၍ပှတျနသေေးသညျ။ပေါငျ၂လုံးကွား အောကျဖကျနားမှပွူးထှကျနသေောပနျးရောငျရဲရဲအဖုတျလေးကိုမာလကအသားမာတကျလကျကွီးဖွငျ့အုပျကိုငျ၍ပှတျဆှဲပေးသညျ။ ဧပရယျဧ။ျအဖုတျလေးမှာအပြိုလေးအတိုငျးပငျစိကပျနပွေီးအမှေးမြားကိုပွောငျနအေောငျရိတျထားသညျ။မာလကလီးမထညျ့သေးပဲ ဧပရယျဧ။ျ
အတှငျးသားနီနီလေးထဲသို့လကျနှဈခြောငျးထိုးထညျ့ပွီးခပျကွမျးကွမျးမှပေေးလိုကျရာကာမအရသာကိုတဈခါမှမခံစားဖူး သောဆရာဝနျမလေးဧပရယျမှာအရညျမြားအဆကျမပွတျစီးကလြာတော့သညျ။”အအဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့””ဖှတျဖှတျပလပျ” ”ဟဟြောငျတှအေထဲကဘာလဲဟ” ”ဟာာပါကငျလေးဟငါကလငျမယားမှတျနတောဟားဟားအဖုတျကောဖငျကောပါကငျဖှငျ့ရတော့မယျဟားဟား” ”လီးတယျဟစေ့ားရကံကွုံတော့အပြိုမခြောခြောတောငျ့တောငျ့လေးကိုမုဒိမျးကငျြ့ရတော့မယျဟဟေ့ားဟား” ဧပရယျမှာတော့မိမိဘဝလကျတှဲဖျောအတှကျရညျရှယျထားသညျ့အပြိုစငျဘဝအားအလုပျကွမျးသမားကွီးကအရသာခံ စားသုံးတော့မညျဖွဈ၍အလှနျကွောကျနသေလိုကာမစိတျမြားလညျးကွှနသေညျ။
”စောကျစိလေးကနီရဲနတောပဲကှာ”မာလကဧပရယျဧ။ျနီနီရဲရဲအစိလေးအားလကျညှိုးနှငျ့လကျမညှပျကာပှတျဆှဲလိုကျရာဧပရယျ တကိုယျလုံးအကွောမြားဆှဲ၍တုနျသှားပွီးအရညျမြားဒလဟောထှကျကာတဈခြီပွီးသှားတော့သညျ။ ”ရှငျအငျ့ရှငျရှငျမမလုပျပါနဲ့တော့” ဆရာဝနျမခြောလေးဧပရယျဧ။ျတငျးယငျးအိစကျသောနို့နှဈလုံးမှာမောပနျးမှုကွောငျ့နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြဖွဈနသေညျ။ မာလကမောဟိုကျနသေောဧပရယျဧ။ျအဖုတျလေးကိုလကျဖွငျ့ဖွဲထားလိုကျပွီး၈လကျမခနျ့ရှညျသောဂျေါလီထညျ့ထားသညျ့လီးမညျး ကွီးဖွငျ့တလေို့ကျသညျ။ထို့နောကျမထညျ့သေးပဲဧပရယျဧ။ျအစိလေးအားဒဈဖွငျ့၎ခကျြခနျ့ပှတျဆှဲလိုကျသညျ။ဧပရယျမှာမောလညျး မောကာမအရသာမြားကလညျးပွငျးလှနျးသဖွငျ့လုံးဝမရုနျးတော့။မာလကဧပရယျဧ။ျအဖုတျထဲသို့လီးမညျးကွီးကိုဒဈဖူးမြှသာထညျ့၍ တထေ့ားပွီးအနအေထားကိုကောငျးကြျောကောငျးစှာမွငျနိုငျစရေနျဘေးတိုကျပွောငျးလိုကျသညျ။
ကောငျးကြျောမှာမိမိမကျြစိရှတှေ့ငျ မိမိဧ။ျဇနီးလောငျးလေးကိုလိုးရနျလီးဖွငျ့တထေ့ားသညျကိုနီးနီးကပျကပျတှရေ့သဖွငျ့အတငျးရုနျးသညျ။ကောငျးကြျောဧ။ျလီးမှာလညျး အစှမျးကုနျတောငျမတျနသေညျ။”ကိုကိုရယျဟငျ့ဟငျ့ခဈြကိုခှငျ့လှတျနျောကိုဟငျ့ဟီးးး”ဧပရယျမှာအနီးတှငျရှိနသေော ကောငျးကြျောဧ။ျပုခုံးတဈဖကျကိုတငျးတငျးဆုပျထားသညျ။မာလအခြိနျမဆိုငျးတော့။ဧပရယျဧ။ျဘျောလီကွိုးနှဈခြောငျးကိုဆှဲကာ လီးကိုဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။”ဗွှတျဗွဈအအဟငျ့အဟငျ့ဟငျ့””ရှိးးးမငျးစောကျဖုတျလေးကတငျးကပျြစီးပိုငျနတောပဲမိနျးမရာ” မာလဧ။ျလီးကွီးမှာဧပရယျ့အဖုတျကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ခကျြခငျြးမဝငျသေး။ဒဈသာဝငျ၍တဈနသေညျ။ ကပျြလှနျးနသေဖွငျ့သှငျးရခကျနသေညျ။ဧပရယျမှာဖငျတုနျးမြားကိုလှုပျခါ၍ရုနျးသေးသျောလညျးဝငျပွီးသားဒဈကပွနျမကြှတျသှား။ မာလစိတျမရှညျတော့။ဧပရယျ့ခါးနှဲ့လေးကိုဆှဲကာနို့အုံတငျးတငျးတဈအုံကိုကိုငျ၍လီးကိုသှတျသှငျးလိုကျသညျ။ဧပရယျမှာအနီးတှငျရှိနသေော ကောငျးကြျောဧ။ျ
ပုခုံးတဈဖကျကိုတငျးတငျးဆုပျထားသညျ။မာလအခြိနျမဆိုငျးတော့။ဧပရယျဧ။ျဘျောလီကွိုးနှဈခြောငျးကိုဆှဲကာ လီးကိုဆောငျ့ထညျ့လိုကျသညျ။”ဗွှတျဗွဈအအဟငျ့အဟငျ့ဟငျ့””ရှိးးးမငျးစောကျဖုတျလေးကတငျးကပျြစီးပိုငျနတောပဲမိနျးမရာ” မာလဧ။ျလီးကွီးမှာဧပရယျ့အဖုတျကဉျြးကဉျြးလေးထဲသို့ခကျြခငျြးမဝငျသေး။ဒဈသာဝငျ၍တဈနသေညျ။ ကပျြလှနျးနသေဖွငျ့သှငျးရခကျနသေညျ။ဧပရယျမှာဖငျတုနျးမြားကိုလှုပျခါ၍ရုနျးသေးသျောလညျးဝငျပွီးသားဒဈကပွနျမကြှတျသှား။ မာလစိတျမရှညျတော့။ဧပရယျ့ခါးနှဲ့လေးကိုဆှဲကာနို့အုံတငျးတငျးတဈအုံကိုကိုငျ၍လီးကိုသှတျသှငျးလိုကျသညျ။၈လကျမလီးမဲကွီးကပထမကောကျကှေးသှားကာတရဈခငျြးဗွှတျကနဲဗွဈကနဲမွညျ၍ဖောကျဝငျနသေညျ။
”ဗွှတျဖှတျအားးးးဟငျ့ဟငျ့” ဧပရယျဧ။ျအပြိုစငျပနျးလေးထဲသို့မာလဧ။ျ၈လကျမလီးကွီးကအပြိုမှေးကိုဖောကျ၍ဝငျသှားတော့သညျ။ ”ဗွှတျဗွဈဖှတျဖှတျရှိးးးးငါ့လီးဝငျသှားပွီဟားဟားမငျးအပြိုဘဝကိုလီးနဲ့လိုးပွီးဖကျြဆီးရတာကောငျးလိုကျတာရှိးးးး” အပြိုစငျသှေးစလေးအခြို့မာလဧ။ျလီးတှငျကပျလာသညျ။”မိနျးမဖငျကိုကော့ပေးထားလဒေါမှလီးပိုဝငျမှာပေါ့ခဈြလေးရဲ့ဟားဟား”မာလဧ။ျလီးကွီးမှာတဈဝကျခနျ့ဝငျသှားပွီးဧပရယျဧ။ျအဖုတျလေးမှာလညျးစပါးလုံးတဈထောကျခနျ့ကှဲသှားသညျ။ ”ဟငျ့ဟငျ့ကြှနျမရှငျ့မိနျးမမဟုတျဘူးဟငျ့ရှငျပဲကြှနျမကိုမတရားကငျြ့ပွီးတော့””ဟငါ့လီးတောငျမငျးစောကျဖုတျထဲဝငျနပွေီငါ့မိနျးမ ဖွဈသှားပွီပေါ့ဟားဟားခဏနမေငျးယောကျြား၇ယောကျတောငျထပျရဦးမှာမငျးကောငျပဲလီးပါတာမဟုတျဘူးငါတို့လဲလီးပါတယျ”……ပွီးပါပွီ။
ကိုညိုကြီးသမီးခရီးထွက်ဖို့လိုတာတွေဝယ်ထားပေးဦး””သြော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမလေးမမလေးကဘာနဲ့သွားမှာလည်း” ”ရှင်သြော်ကားနဲ့ပဲသွားရမှာတောလမ်းလည်းဖြစ်ခရီးဝေးလည်းသွားရမှာဆိုတော့အိမ်ကကားယူမသွားတော့ဘူး” ”ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမယ်မမလေး” ကိုညိုကြီးမှာဧပရယ်ထက်အသက်ကြီးသော်လည်းဧပရယ်အားလေးစားမှုဖြင့်မမလေးဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မှာစရာရှိသည်များမှာ၍ထွက်သွားသောအလှဘုရင်မလေးဧ။်သေးသွယ်သောခါးလေးအောက်မှတောင့်တင်းပြည့်ဖြိုးသောတင်စိုင် အိအိတင်းတင်းကြီးများကိုညိုကြီးမျက်စိကျွတ်ထွက်မတတ်ကြည့်နေမိသည်။ဧပရယ်တစ်လှမ်းလှမ်းသွားတိုင်းတင်စိုင်ကြီးများက စည်းချက်ကျတုန်ခါသွားသည့်အပြင်အင်္ကျီနှင့်ထဘီကြားမှခါးသားဝင်းဝင်းလေးကလက်ကနဲလက်ကနဲဖြစ်သွားသေးသည်။ ”ဟဲ့ညိုကြီးသမီးခရီးထွက်မှာတဲ့အဆင်အပြေဆုံးကားစီစဉ်ပေးလိုက်”
”သြော်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီလေးခုပဲဧပရယ်လာပြောသွားတာကားကတော့expressတော့မရှိဘူးသီးသန့်ငှားတဲ့စလွန်းပဲရမှာ” ”အပြန်လည်းကြိုပြောရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်သဘက်ခါနံနက်၇နာရီစထွက်မှာဟိုကိုညနေ၅ခွဲ၆လောက်ရောက်မယ်ဗျ” ”အေးအေးမင်းပဲစီစဉ်ထားလိုက်”ညိုကြီးမှာဧပရယ်တို့အိမ်မှအလုပ်သမားမဟုတ်သော်လည်းဧပရယ့်အဖေကုမ္ပဏီတွင်၈နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်လာသဖြင့်ဧပရယ်တို့နှင့် အတော်ရင်းနှီးသည်။အသက်၄၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဧပရယ်တို့အိမ်သို့ပစ္စည်းလာသယ်တိုင်းဂိုထောင်နှင့်ကပ်လျက်လသာဆောင်တွင် လှမ်းထားလေ့ရှိသည့်ဧပရယ့်ဘော်လီလေးများကိုကိုင်၍ဧပရယ့်ပင်တီနုနုလေးများဖြင့်လီးကိုအုပ်ကာဂွင်းထုလေ့ရှိသည်။ ညိုကြီးမှာဧပရယ့်ကိုစတင်မြင်မြင်ခြင်းကပင်မြင်သူငေးလောက်သည့်အလှဘုရင်မလေးကိုစိတ်ထဲမှအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်မှားခဲ့မိသည်။ ယခုလည်းပစ္စည်းလာသယ်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်၍၃ထပ်သို့တက်လာခဲ့သည်။ညိုကြီးအတွက်ကံကောင်းပြန်ပြီ။
လှမ်းထားသောအဝတ်များထဲတွင်အသားရောင်နုနုဆွဲသားဇာဘော်လီလေးနှင့်အဖြူရောင်ချိတ်၅ခုတပ်ဇာဘော်လီလေးတို့ကိုတွေ့ လိုက်သည်။မျက်လုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ရာအဖြူရောင်ဆွဲသားပင်တီနုနုလေးတစ်ထည်ကိုပါတွေ့လိုက်သည်။ ညိုကြီးစိတ်မထိန်းနိုင်တော့။ဧပရယ့်ဘော်လီအသားရောင်လေးကိုရင်ပုံခွက်နေရာမှကိုင်၍မျက်နှာတွင်အပ်ကာအားရပါးရရှူရှိုက် လိုက်သည်။မွှေးပျံ့နေသောရနံ့သင်းသင်းလေးကညိုကြီးဧ။်တစ်ထပ်တည်းသောပုဆိုးအောက်မှလိင်တံကိုတောင်မတ်လာစေသည်။ ညိုကြီးမှာဧပရယ့်အလှကွန်ယက်တွင်မိခဲ့သောယောက်ျားပေါင်းများစွာအနက်မှအရေးမပါသောအညတရတစ်ယောက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုအလှဘုရင်မလေးကလွန်ခဲ့သော၅ရက်ကပင်လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှလူရည်သန့်တစ်ဦးနှင့်စေ့စပ်သွားခဲ့သည်။ စေ့စပ်ပွဲနေ့တွင်ဧည့်သည်များကိုဧည့်ခံရင်းပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးဖြင့်အလှကြီးလှနေသည့်ဧပရယ့်ကိုညိုကြီးစိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်မိသည်။ ဧည့်ခံပွဲပြီးပြီးချင်းပင်ဧပရယ့်ပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးအထက်မှပေါ်နေသောနူးညံ့ဝါဝင်းနေသည့်ပုခုံးသားလေးများနှင့်နို့ညှာလေးကို မှန်း၍စိတ်ထဲမှဧပရယ်အားမလှုပ်နိုင်အောင်ကြိုးတုပ်ကာအကြိမ်ကြိမ်စိတ်မှန်းဖြင့်မုဒိမ်းကျင့်နေမိခဲ့သည်။
ညိုကြီးအတိတ်ကိုပြန်တွေးနေရာမှယခုရရှိထားသည့်အခွင့်အရေးကိုသတိပြန်ရလာသည်။ဧပရယ်မှာသတို့သားလောင်းနှင့်ခရီးထွက် ပြီးပြန်လာ၍မကြာမီပင်လက်ထပ်လျှင်ထပ်မည်ဖြစ်၍နောက်ဆိုလျှင်ယခုကဲ့သို့အခွင့်အရေးရချင်မှရပေတော့မည်။ ညိုကြီးဧပရယ့်ဘော်လီလေးကိုအငမ်းမရရှူရှိုက်ရင်းဧပရယ့်ပင်တီလေးကိုပုဆိုးအောက်သို့ထည့်ကာလီးတံကိုလုံအောင်ပတ်လိုက် သည်။ထို့နောက်ရှေ့တိုးနောက်ငင်စလုပ်တော့သည်။နူးညံ့လွန်းသောပင်တီအသားပျော့ပျော့လေးကညိုကြီးဧ။်လီးတံကြီးတစ်လျှောက် ကောင်းလွန်းသောအထိအတွေ့ကိုပေးစွမ်းနေသည်။ညိုကြီးဧ။်လက်ကလည်းဧပရယ့်ဘော်လီရင်ပုံခွက်ဧ။်အောက်မှဧပရယ့်နို့သီးလေး များထိနေမည့်နေရာကိုလက်မဖြင့်ပွတ်နေမိသည်။ညိုကြီးဧ။်စိတ်ထဲတွင်တော့အလှဘုရင်မ၊အိနြေ္ဒရှင်မလေးဧပရယ်အားမလှုပ်နိုင် အောင်ချုပ်၍မုဒိမ်းကျင့်နေမိသည်။
ညိုကြီးအထင်ကျွဲကောသီးတခြမ်းစာခန့်ရှိမည့်ဧပရယ့်နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးနှစ်အုံကိုလည်း စိတ်ကူးဖြင့်အဓမ္မကိုင်နေမိသည်။ဧပရယ်အားဂိုထောင်ထဲရှိပစ္စည်းဖာပေါ်တွင်လေးဖက်ထောက်ချုပ်ထားပြီးနောက်မှနေ၍ဧပရယ့် ပန်းလေးထဲသို့လီးကိုစိတ်ကူးဖြင့်ထည့်နေမိသည်။ဧပရယ့်အော်သံငိုသံများကညိုကြီးကိုပိုစိတ်ကြွစေသည်။ ”အအအအားးးရှိးးးးးးထွက်ပြီဧပရယ်ဟားဟားမင်းအပျိုဘဝကိုငါရသွားပြီအအရှိးးးးးးးးး” ညိုကြီးဧပရယ့်ပင်တီလေးအားလျှင်မြန်စွာဖယ်လိုက်ပြီးသုက်ရည်များကိုဧပရယ့်ကိုယ်ထဲသို့စိတ်ကူးဖြင့်ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ ”တီတီးးးးးးးးးးးတီတီတီးးးးးးးးးး” အောက်မှပစ္စည်းသယ်ရန်စောင့်နေသောကားကစိတ်မရှည်တော့သဖြင့်ဟွန်းတီးတော့သည်။ ”လာပြီဗျို့ဒီမှာပစ္စည်းရှာနေရလို့”ညိုကြီးဧပရယ့်အဝတ်အစားများကိုအဝတ်တန်းတွင်စနစ်တကျပြန်လှမ်းသည်။ ထို့နောက်ပစ္စည်းဖာကိုထမ်းကာအောက်သို့ပြေးဆင်းလာခဲ့တော့သည်။
အချိန်၁၀နာရီခွဲခန့်ကားစီးပြီးနောက်ဧပရယ်နှင့်ကောင်းကျော်တို့နယ်မြို့လေးသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ”အင်းလူလည်းနွမ်းချိနေပြီရေချိုးလိုက်ဦးမှ” ဟင်းဟင်းသူဧပရယ့်ကိုရည်းစားစကားစပြောတော့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့။ စာအုပ်ကြီးကလက်ကကိုင်လာသေးတယ်။မျက်နှာကြီးကလည်းနီလို့။ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်ပြောချလိုက်တာလေ။ ဒါပေမယ့်ခုတော့အဲဒီကောင်ကဧပရယ်ရဲ့အချစ်ရဆုံးချစ်သူဖြစ်လာပြီလေ။သြော်….သိပ်ချစ်ရတဲ့ကိုရယ်လေ။ ကို့ပုံစံကပိန်ပိန်ပါးပါးအသားဖြူဖြူပေမယ့်ရုပ်ကတည်တည်တံ့တံ့လေးမို့ဧပရယ်နှင့်လိုက်ဖက်သည်ဟုပြောကြသည်။ ကို့အကြောင်းတွေစဉ်းစားရင်းရေပန်းအောက်တွင်ထိုင်နေမိသည်မှာအတော်ကြာသွားသည်။ ရေပန်းကိုပိတ်၍တဘက်တစ်ထည်ပတ်ကာရေချိုးခန်းထဲမှထွက်ခဲ့သည်။
”အင်းငါ့အသားလေးကဖြူဥနေတာပဲဟင်းဟင်းကိုကတော့ကြည့်ချင်မှာပေါ့အချိန်ဆွဲထားလိုက်ဦးမယ်” ဧပရယ်ရေချိုးပြီးကိုယ်တုံးလုံးဖြင့်အခန်းထဲမှမှန်ရှေ့တွင်တစ်ယောက်တည်းစဉ်းစားခန်းဖွင့်နေမိသည်။ ”အင်းအင်္ကျီကအပါးပဲဝတ်မှာဆိုတော့ဘော်လီပဲဝတ်လိုက်ပါမယ်လေ”ဧပရယ်ဖြောင်းစင်းသွယ်တန်းနေသောပေါင်တံဝင်းဝင်းလေး တစ်လျှောက်အသားရောင်ပင်တီလေးကိုဆွဲတင်လိုက်သည်။အိစက်လုံးဝန်းနေသောတင်စိုင်တင်းတင်းကြီးနှစ်လုံးတွင်ပင်တီလေးက ကွက်တိကပ်သွားသည်။
ထို့နောက်ချိတ်၅ခုတပ်အသားရောင်ဘော်လီလေးကိုပုခုံးပေါ်သို့ကြိုးတင်လိုက်ပြီးမို့ဝန်းတင်းအိနေသော ရွှေရင်အစုံအားဘော်လီရင်ပုံခွက်တွင်အံကျဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်သည်။ထို့နောက်ဘော်လီချိတ်များကိုတစ်ချိတ်ချင်းသေချာတပ် လိုက်သည်။ထို့နောက်တင်းယင်းနေသောဘော်လီအားအံကျဖြစ်သွားအောင့်ပြုပြင်လိုက်သည်ဖြူဝင်းနေသောရင်ညွှန့်နှစ်မွှာက ဘော်လီပေါ်မှလျှံထွက်နေသည်။ထို့နောက်အစိမ်းရောင်နုနုထဘီပွင့်ရိုက်အပျော့လေးကိုတင်းနေအောင်ဝတ်လိုက်သည်။ထို့နောက်ရင်အပေါ်ပိုင်းတွင်ဇာစဖြစ်သည့်အစိမ်းရောင်လက်ပြတ်လေးကိုတင်းယင်းစွာဝတ်လိုက်သည်ပုခုံးပေါ်တွင်တင်းနေသောဘော်လီကြိုးနှစ်ချောင်းနှင့်အင်္ကျီအောက်မှရင်ညွှန့်လေးမှာယောက်ျားများကိုလည်ပြန်ငေးစေလောက်သည်စိတ်တိုင်းကျအလှပြင်ဆင်ပြီးနောက်ဧပရယ်မှန်ထဲမှပုံရိပ်ကိုကျေနပ်စွာကြည့်ပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်ခဲ့သည်။
”ကိုရေလမ်းသွားလျှောက်ရအောင်”ဟချစ်ကတကယ်ကိုလှနေတာပဲသူများတွေကြည့်ကုန်တော့မယ်””သြော်ကြည့်တာများကြည့်ပစေပေါ့ကိုကလည်းဟင်းဟင်း””ဟာဟျောင်တွေဟိုမှာကြည့်စမ်းလီးတယ်ကွာအသားဖြူဖြူလေးအိုးလေးကလည်းတင်းနေတာပဲကွာ””ဟျောင်လန်းလှချည်လားဟ””တောက်အဲ့လိုဆော်လေးသာလေးဖက်ကုန်းခိုင်းပြီးမုဒိမ်းကျင့်လိုက်ရလို့ကတော့ရှိးးးပြောရင်းလီးတောင်တောင်တယ်” ”အေးကွာအိုးတွေကရှယ်ပဲရုပ်ကလည်းချောဖင်ထောင်ခိုင်းပြီးဖင်လိုးလိုက်ရလို့ကတော့” ဧပရယ်ဧ။်သေးကျင်သောခါးလေးနှင့်လုံးဝန်းပြည့်ဖောင်းသောဖင်သားများကိုကြည့်ရင်းလူတစ်စုစိတ်ကြွနေကြသည်ဧပရယ်ကတော့အကြည့်ခံရပေါင်းများပြီဖြစ်၍ဂရုပင်မစိုက်မျက်နှာလေးမော့ကာမော့ကာနှင့်ပြုံးရယ်ရင်းလမ်းလျှောက်နေသည်
မာလအဆင့်တက်လာသည်။ဧပရယ်ဧ်ခါးလေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖက်ထားပြီးကျောပေါ်မှညာလက်ကတဖြည်းဖြည်းဧပရယ့်ချိုင်းကြားဆီရောက်လာသည်ဧပရယ့်ရှေ့တွင်လည်းမာလတို့လူစုထဲမှတစ်ယောက်ကကျောပေးပီးကပ်ရပ်နေသဖြင့်ဧပရယ်လှုပ်မရ။မာလဧ။်ညာလက်ကလည်းဧပရယ့်ချိုင်းဆီသို့ရောက်လာသည်ဧပရယ်မှာညာလက်ဖြင့်ကားအလယ်မှတန်းကိုကိုင်ထားသဖြင့်ညာလက်ကမြှောက်နေသည်။ဧပရယ်မာလဧ်လက်လူကြားထဲမှကြပ်ညှပ်၍တိုးဝင်လာသည်ကိုသိသော်လည်းမကြာပါဘူးလေဟုတွေးကာအောင့်ခံနေလိုက်သည်ဧပရယ်ဧ်နို့နှစ်အုံမှာရှေ့မှမာလတို့ လူဧ်ကျောတွင်အနည်းငယ်ဖိမိနေသည်။မာလဧ်လက်မှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်ဧပရယ်ဧ်မို့တင်းဆူဖြိုးသောညာဖက်နို့အုံပေါ်သို့ရောက် လာသည်။
ဧပရယ်မှာမိမိဧ်ရင်သားတစ်အုံလုံးကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်အကိုင်ခံနေရသဖြင့်အလွန်နေရခက်နေသည်မာလကလည်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွှတ်မခံသေးကျင်လွန်းသောဧပရယ့်ခါးနွဲ့လေးကိုဆွဲဖက်ထားရာဧပရယ်ဧ။်တင်းယင်းလုံးဝန်းနေသာတင်စိုင်အိအိတင်းတင်းကြီးနှစ်လုံးမှာမာလဧ။်ပေါင်ခြံနှင့်ဖိကပ်မိနေသည်။ မာလမှာပုဆိုးကိုလှန်တင်ထားသောကြောင့်လီးတန်ကြီးမှာဧပရယ်ဧ်ဖွံ့ထွားလှပသောဖင်တုံးကြီးနှစ်တုံးကြားတွင်အမြောင်းလိုက်ရောက်နေသည်ဧပရယ်မှာရှက်လွန်းသဖြင့်လှပသောမျက်နှာနုနုလေးမှာနီရဲနေသည်ဧပရယ်ကိုယ်ကိုစောင်း၍ရုန်းထွက်ရန်ကြိုးစားလိုက်သော်လည်းမာလဧ်လီးတန်ကြီးအားပိုတောင်လာအောင်ဖိပွတ်ပေးသလိုဖြစ်နေရာ မာလဧ။်လီးတံကြီးမှာဧပရယ့်ဖင်တုံးများဧ်နူးညံ့အိစက်မှုကိုတဝကြီးခံစားနေရသည်။မာလကဧပရယ်အားရင်ခွင်ထဲထည့်၍လီးဖြင့်ထောက်ထားပြီးလည်ကုပ်ဝင်းဝင်းလေးအားပါးစပ်ဖြင့်စုပ်နမ်းတော့သည်။ ဧပရယ့်နို့နှစ်လုံးကိုလည်းမိမိရရကြီးစိတ်တိုင်းကျကိုင်ကာဆုပ်နယ်တော့သည်။
ထို့ပြင်အောက်ကလည်းလိုးနေသလိုမျိုးလီးဖြင့်ဧပရယ့်ဖင်ကိုညှောင့်ပေးနေရာဆရာဝန်မလေးဧပရယ်မှာမာလဧ။်အဝတ်မချွတ်ပဲလိုး ခြင်းခံနေရသလိုဖြစ်နေသည်။မာလဧ။်လက်များကလည်းဧပရယ့်နို့များကိုကိုင်ရုံဖြင့်အားမရ။ပေါင်ကြားသို့ရောက်လာသည်။ တစ်ခါတစ်ခါမာလနောက်မှညှောင့်လိုက်လျှင်ဧပရယ်ဧ။်ကိုယ်လုံးလေးမှာသိသိသာသာကြီးကိုတုန်တုန်သွားသည်။ ဧပရယ်မှာလည်းမိမိဧ။်အသားစိုင်များကိုသူစိမ်းယောက်ျားကြီးတစ်ဦးကကိုင်ချင်တိုင်းကိုင်နေသောကြောင့်ပန်းလေးထဲမှစိုစိစိဖြစ်လာသည်။မာလဧ။်လီးတံကြီးကဧပရယ့်ဖင်ကြားတွင်ကွက်တိကိုဝင်နေရာဧပရယ်မှာဖင်သားများကိုအလိုလိုကျုံ့ထားမိသည်။ မာလကဧပရယ်ဧ။်နို့နှစ်အုံလုံးကိုညာလက်ဖြင့်ကိုင်၍ရင်ခွင်ထဲဆွဲဖက်ထားသည်။
ထို့ပြင်ဧပရယ့်အင်္ကျီမှာလည်းမာလဧ။်ကောင်းမှု ကြောင့်အင်္ကျီနှင့်ထဘီကြားလက်တစ်ဝါးစာကျော်ကျော်ပေါ်နေသည်။မာလကဧပရယ့်ဖင်ကြီးအားကိုင်ညှစ်သည့်အပြင် တစ်ခါတစ်ခါဧပရယ်ဧ။်ပေါင်ရင်းနားထိခွဲထားသောထဘီစကတ်လေးထဲသို့လိုက်နှိုက်လာသည်။ ဧပရယ်သည်းမခံနိုင်တော့။ပေါင်နှစ်လုံးကိုလိမ်ယှက်လိုက်ပြီးနောက်သို့လှည့်ကာ ”ရှင်လွန်လာပြီနော်ကျွန်မအော်လိုက်ရမလား” ဧပရယ်ဧ။်နှုတ်ခမ်းဖူးလေးမှာတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ မာလကလက်ကိုဧပရယ့်ပေါင်ကြားမှရုတ်လိုက်သော်လည်းအလျှော့တော့မပေး။ လက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းဧပရယ့်နို့တွေကိုင်နေသည်။ဧပရယ်မာလဧ။်လက်ကိုဆွဲဖယ်၍အော်တော့မည့်ဆဲဆဲမှာပင်…. ”ကဲဆင်းမယ်ဟေ့ဆင်းကြဆင်းကြ”စပါယ်ယာဧ။်အော်သံကြောင့်မာလစိတ်ညစ်သွားသည်။ဧပရယ့်နို့အုံကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းတစ်ချက် နယ်ပြီးမှလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ဧပရယ်ကမာလဧ။်လက်သရမ်းမှုကြောင့်လက်တဝါးစာမကဘော်လီအောက်ဆုံးချိတ်ပင်ပေါ်နေပြီဖြစ်သောခါးတိုအင်္ကျီလေးကို ပြန်ဆွဲချသည်။
ဧပရယ်ဧ။်ခါးသားဝင်းမွတ်မွတ်လေးများကိုမာလစိတ်ကြိုက်ကိုင်သွားခဲ့သည်။ဝမ်းဗိုက်သားလေးများကိုလက်ကြမ်း ကြီးဖြင့်ဖက်ကိုင်သည့်အပြင်ချက်လေးကိုပါလက်ချောင်းနှင့်ဆွခဲ့သဖြင့်ဧပရယ်နုံးချိသွားသည်။ ဧပရယ်စိတ်တွေတမျိုးကြီးဖြစ်နေသည်။မိမိတယုတယထားခဲ့သည့်ရင်သားလှလှတွေကိုကူလီတစ်ယောက်ကကိုင်ချင်တိုင်းကိုင် သွားခဲ့သည်။ဘေးကကောင်တွေကလည်းဧပရယ့်ဖင်သားတွေကိုကိုင်ကြတာများရစရာတောင်မရှိ။ ပန်းလေးထဲမှအရည်အနည်းငယ်စီးကျနေသည်ဟုထင်မိသည်။ ”တောက်မာလတို့ကတော့ကြီးပွားတယ်ကွာ””ဟျောင်စကားမများနဲ့မျက်ချေပြတ်သွားမယ်” ဧပရယ်မိတ္တူကူးပြီးနောက်ဈေးထဲသို့လမ်းကြုံဝင်ဝယ်လိုက်မည်ဟုစိတ်ကူးကာလျှောက်လာသည်။သားငါးတန်းလွန်ပြီးနောက်ဟင်းရွက် တန်းသို့သွားရန်ဈေးလမ်းကြားလေးထဲသို့ဝင်လိုက်သည်။ဈေးလမ်းကြားမှာလူအလွန်ပြတ်ပြီးမည်သူမျှဖြတ်သန်းလေ့မရှိကြ။
အကြောင်းမှာထိုဈေးလမ်းကြားတွင်ဆိုင်ခန်းပျက်များသာရှိပြီးဟင်းရွက်တန်းသို့ရောက်ရန်မှာလမ်းမပေါ်မှသွားလျှင်ပိုနီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ဧပရယ်မှာဒီဈေးသို့၂ခါလောက်ရောက်ဖူးသော်လည်းမကျွမ်းသေးသဖြင့်ဤလမ်းကြားထဲသို့ဝင်လာမိခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဟျောင်တွေစရအောင်လမ်းကြားထဲဝင်သွားပြီ””စားရလို့ကတော့ဆွေမျိုးမေ့ပြီကွာ” မာလတို့၅ယောက်ဧပရယ်ဧ။်နောက်မှလိုက်သွားကြပြီးလမ်းနှင့်အတော်ဝေးသည့်နေရာရောက်လျှင်ဧပရယ်အားလမ်းဘေးမှအမိုးအဖီ လေးအောက်သို့ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးအဆင်သင့်ရှိနေသောစားပွဲခုံပေါ်တွင်ကုန်းခိုင်းထားလိုက်သည်။ ”ဟင်ရှင်ရှင်တို့လွှတ်ကျွန်မအော်လိုက်မှာနော်”မာလကဧပရယ်ဧ။်နို့နှစ်လုံးကိုမိမိရရကိုင်၍ဖင်ကိုဆက်တိုက်ညှောင့်ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက်ဧပရယ်ဧ။်အင်္ကျီနှိပ်သီးများကိုဖြုတ်၍အင်္ကျီကိုလှန်တင်လိုက်သည်။ထို့နောက်ဧပရယ့်ထဘီကိုလျင်မြန်စွာလှန်၍ပင်တီကို ဆွဲချွတ်ကာလီးဖြင့်အဖုတ်ကိုတေ့လိုက်သည်။ဘော်လီထဲလက်နှိုက်ကာနို့ကိုင်သည်။ဧပရယ်ဧ။်ဘော်လီမှာတင်းကျပ်နေသဖြင့်နှိုက်မရပဲရင်ညွှန့်သားဖောင်းဖောင်းအိအိလေးများကိုသာကိုင်မိသည်။ မာလကဧပရယ့်ဘော်လီချိတ်၂ခုကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအနည်းငယ်လျော့ရဲရဲဖြစ်သွားသောဘော်လီထဲသို့လက်နှိုက်လိုက်သည်။ ဧပရယ်ဧ။်နို့အုံလေးမှာနုထွေးအိစက်တင်းယင်းနေပြီးနို့သီးလေးမှာလည်းအပျိုလေးလိုပင်နို့အုံပေါ်တွင်သေးသေးလေးကပ်နေသည်။ မာလကဧပရယ့်ညာဖက်နို့အုံကိုအားရပါးရဆုပ်နယ်ရင်းနို့သီးလေးကိုလိမ်ဆွဲပေးလိုက်ရာဧပရယ်ကျောပြင်လေးကော့တက်လာသည်။ မာလအချိန်မဆိုင်းတော့။ဧပရယ်ဧ။်ခါးနွဲ့နွဲ့ဝင်းဝင်းလေးကိုကိုင်ဆွဲကာလီးကိုဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။
သို့သော်ဧပရယ်မှာအတင်းရုန်းနေသဖြင့်အပေါက်မတည့်ပဲချော်သွားသည်။မာလဧ။်လီးကြီးမှာဆရာဝန်မလေးဧပရယ်ဧ။်အစိလေး ကိုတိုက်မိသွားရာဧပရယ်တွန့်သွားသည်။မာလနောက်ထပ်အကြိမ်ကြိမ်ထည့်သော်လည်းမဝင်နိုင်သဖြင့်စိတ်မရှည်တော့။ ”ဟျောင်တွေဒီကောင်မဖင်ကိုထိန်းထားစမ်း””ဖြန်းဖြန်းးးးငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းကောင်မမင်းကိုကောင်းအောင်လိုးပေးမလို့” ”ကယ်ကြပါဦးရှင်ကယ်ကြပါ”လမ်းနှင့်ဝေးသော်လည်းလူတစ်ယောက်ယောက်ကြားသွားပြီးအုပ်လိုက်ရောက်လာပါကကိုယ်ကျိုးနဲ မည်ဖြစ်၍မာလတို့၅ယောက်လုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြတော့သည်။အမှန်မှာမည်သူမှမကြားလိုက်။ဧပရယ်အဝတ်များကိုပြင်ဝတ် ၍ထိုနေရာမှအမြန်ထွက်ခဲ့သည်။ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေသည်။ကို့ကိုတော့ပြန်မပြောပြချင်တော့။ အပျော်ခရီးတွင်ပြသနာများမဖြစ်စေချင်။ထိုသူတို့ဧ။်မျက်နှာများကိုလည်းကောင်းကောင်းမတွေ့လိုက်ရ။ အဖြစ်အပျက်များမှာမြန်ဆန်လွန်းခဲ့သည်။
ဧပရယ်ဘဝပျက်မည့်ဘေးမှသီသီလေးလွတ်ခဲ့သည်။နောက်ဆိုဒီဈေးမလာရဲတော့။အကယ်၍ထိုသူများသာထွက်မပြေးပဲဆက်ကျင့်လျှင်ဆိုသည့်အတွေးကဧပရယ်အားကျောချမ်းစေသည်။ ”ဟျောင်ကွာလီးပဲဘယ်သူမှမကြားလောက်ဘူးကွလိုးရတော့မယ့်ဟာကိုကွာ” ”လီးကြားရင်ထောင်ထဲလည်းဝင်ရမယ်စောက်ခွက်လည်းစုတ်မှာဟ” ”နာတယ်ကွာလီးဖင်ကြီးကိုဖြူဖွေးပြီးလုံးတင်းနေတာပဲကွာတောက်နို့တွေဆိုလည်းတင်းအိနေတာပဲ” မာလတို့မှာကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေကြသည်။ ”ကိုရယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကားမရလည်းဒီမှာပဲတစ်ညတည်းကြတာပေါ့””ချစ်ရယ်ဒီမှာတည်းတာကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်တို့အလုပ်တွေလွှဲထား တာနှစ်ပတ်တောင်ရှိပြီရတဲ့ကားနဲ့ပဲပြန်ကြတာပေါ့ညနေ၅နာရီမှာကားကြုံတွေရှိတယ်လို့ပြောကြတာပဲ” ”ကိုယ်တို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့လည်းနောက်၂လလောက်ဆိုတော့စစီစဉ်ချင်ပြီ” ”အင်းပါကိုရယ်ကားရရင်တော့ပြန်ကြတာပေါ့ဒါပေမယ့်ဒီလိုမြို့လေးမှာကားရဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်နော်ကို” ”အင်းချစ်ကိုယ်ဂိတ်မှာသွားစုံစမ်းကြည့်ဦးမယ်”
”ချစ်ကားကတစ်စီးပဲရှိတော့တယ်လော်ရီကားပဲရတယ်သွားမှာလားချစ်” ”အင်းကိုရယ်သွားရတော့မှာပေါ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့သူမအားတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီညပဲရတာနဲ့ပြန်ရမှာပေါ့” ”ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ကိုငယ်လာရင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ခုတော့အဝတ်နည်းနည်းနဲ့အရေးကြီးတာတွေပဲယူခဲ့တယ်” သို့သော်ထိုကားပေါ်တွင်ဧပရယ်သတိမထားမိသောအချက်ကြီးတစ်ချက်ရှိနေသည်ကိုမသိခဲ့။ ကားပေါ်ရောက်မှပါလာသောခရီးသည်၆ယောက်လုံးယောက်ျားတွေချည်းဖြစ်နေသဖြင့်ဧပရယ်စိတ်ပူမိသည်။ကားကခပ်ကျဲကျဲ။ ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ကုန်တွေအပြည့်တင်ထားသော်လည်းကားကကြီးသဖြင့်နေရာလွတ်တွေများနေသည်။ ဧပရယ်သူ့ဖက်သို့တိုး၍တိုးတိုးလေးမျက်နှာငယ်လေးဖြင့်ပြောမိသည်။”အကိုယောက်ျားတွေချည်းပဲဧပရယ်ကြောက်တယ်လမ်းမှာတစ်ညလုံးနေရဦးမှာမိန်းမဆိုလို့ဧပရယ်တစ်ယောက်တည်း” ဧပရယ်ပြောပုံကတုံတုံရီရီလေးနှင့်အတော်လေးကြောက်နေသည့်ဟန်။ ”မကြောက်ပါနဲ့ဧပရယ်ရယ်ကိုယ်တစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်” ”အကိုလူတွေကဓားပြတိုက်မယ့်လူတွေတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်” ခရီးသည်၆ယောက်လုံးကအသက်၃၀ကျော်၄၀၀န်းကျင်လူလတ်ပိုင်းအလုပ်ကြမ်းသမားရုပ်တွေ။
”မဟုတ်ပါဘူးကွာပုံစံကြည့်ရတာရာဘာခြံအလုပ်သမားတွေနေမှာပါကြည့်ပါလားအထုပ်တွေအပိုးတွေနဲ့” ”အင်းအင်းဒါပေမယ့်သတိနဲ့နေနော်တစ်ကားလုံးယောက်ျားတွေချည်းပဲဧပရယ်ကြောက်တယ်” ”အေးပါကွာအေးပါကိုယ်သတိနဲ့နေပါ့မယ်” ဧပရယ်ဒီမျှစိုးရိမ်နေတော့ကောင်းကျော်မျက်မှန်နက်တပ်ပြီးငနဲတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧပရယ်ကချောချောလှလှ လေးမို့ထိုသူတွေအသည်းအသန်ခပ်ရိုင်းရိုင်းကြည့်နေကြတာတော့အမှန်။မိန်းမမမြင်ဖူးသူတွေကျနေတာပဲ။စားမတတ်ဝါးမတတ်နှင့်။ ဒီတော့လည်းကောင်းကျော်အကြံထုတ်ရပြန်သည်။ဒီလူတွေနှင့်ညအထိနေလို့မဖြစ်။သို့သော်တခြားကားကလည်းမရှိ။ ဧပရယ်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်အားထားနေသည်မို့သူကလေးမှည့်တစ်ပေါက်မစွန်းစေဖို့ကိုယ့်မှာတာဝန်အပြည့်ရှိသည်။ သူစိတ်ထင်လို့လားမသိ။ဟို၆ယောက်ရဲ့ပုံစံကလည်းဘာတွေနှီးနှောတိုင်ပင်နေကြသည်မသိ။
မျက်ရိပ်မျက်ကဲတွေပြနေသလိုလို။ တီးတိုးစကားတွေပြောနေသလိုလို။ကောင်းကျော်မလိုသေးလိုသေးအကြံထုတ်ရတော့သည်။ဒီလူတွေနှင့်မမှောင်ခင်ခွဲမှပါပင်။ ဒါပေမယ့်ကားကကုန်ကားမို့တောက်လျှောက်မောင်းနေလိုက်တာ။အဲ…ဂိတ်တွေမှာတော့ရပ်သည်။ဂိတ်တစ်ခုခုမှာတော့ဆင်းရမည်။ အနည်းငယ်မှောင်လာသည်အထိအခွင့်မသာသေး။သတိနှင့်အမြဲနေနေရသည်မို့ကောင်းကျော်အာရုံထဲမှာအန္တရာယ်အငွေ့အသက် တွေခံစားနေရသလိုလို။ကားပေါ်မှလူ၆ယောက်အမူအယာကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြမ်းတမ်းလာလိုက်တာလူစင်စစ်မှဘီလူးသရဲဖြစ် တော့မိနှယ်။
ကားဒရိုင်ဘာနှင့်စပါယ်ယာကရော။သူတို့တွေလည်းအတူတူပဲလား။ကောင်းကျော်လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားပေမယ့်ကျောရိုးထဲကစိမ့်တက်လာလိုက်တာငှက်ဖျားတက်သည့်နှယ်။ ဧပရယ်ကတော့ကောင်းကျော်လက်မောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားသည်။ယခုအချိန်အားကိုးစရာကသူပဲရှိတယ်လေ။ ကောင်းကျော်ကိုယ်ကိုမတ်မတ်ပြင်ထိုင်လိုက်ပြီးဧပရယ့်ပုခုံးကိုဖက်ထားလိုက်သည်။သူတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သည်ကိုမြင်လျှင် ကျန်လူများကလည်းမျက်ချည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်။”ဘာဖြစ်တာလဲဟေ့”လမ်းတစ်လျှောက်အတော်မှောင်လာသည့်အပြင်လူနေအိမ်ခြေလည်းမရှိတာမို့ထိုသူတို့အတင့်ရဲလာကြသည်။
”ဟဲဟဲဒီကညီလေးတို့ကမင်္ဂလာဆောင်တာမကြာသေးဘူးထင်တယ်ဟဲဟဲညီမလေးကလည်ျးောလည်းချောခန္ဓာကိုယ်လည်းလှဆို တော့ဟင်းဟင်းဟင်း””ကိုကြီးသာဆိုရင်တော့ညီမလေးလိုမိန်းမရရင်တစ်ညတည်းနဲ့သေပျော်ပြီဟဲဟဲဟဲ” ဘာတွေပြောလို့ပြောနေမှန်းမသိ။ဧပရယ်ဂရုမစိုက်ပဲမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့လှည့်ထားလိုက်သည်။ကောင်းကျော်ကတော့မျက်နှာပေါ်ဦးထုပ်တင်ကာအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေရာမှခရီးပန်းထားသဖြင့်မှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားသည်။ ကားကညနေ၄နာရီခွဲခန့်တွင်စထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကိုကလည်းအိပ်ပျော်နေပြီထင်သည်။ဤကားပေါ်တွင်ပါလာသောသူ၆ယောက် လုံးမှာအသက်၃၀ကျော်၄၀ပတ်ဝန်းကျင်ရှိယောက်ျားကြီးများသာဖြစ်ပြီးကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်သူအလုပ်ကြမ်းသမားများဖြစ်ဟန်ရှိ သည်။ထိုသူတို့ဧ။်အသားအရေမှာညိုမည်းခြောက်သွေ့နေပြီးပုဆိုးတိုတိုများကိုသာဝတ်ထားကြသဖြင့်ကြီးမား သန်မာသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးများမှာကြွက်သားမြောင်းများပုံမကျစွာထွက်ပေါ်နေသည်။
ထို့ပြင်ဒရိုင်ဘာနှင့်စပါယ်ယာမှာလည်းကားစ ထွက်ချိန်မှစ၍တိုးတိုးတိုးတိုးနှင့်ဘာတွေပြောနေကြမှန်းမသိ။တစ်ခါတစ်ရံတဟီးဟီးနှင့်ရယ်၍ဧပရယ့်ကိုလှမ်းကြည့်သေးသည်။ အခြား၆ယောက်မှာလည်းဧပရယ်ဧ။်လှပဖြူဝင်းသောကိုယ်လုံးကိုစားမတတ်ဝါးမတတ်မီးတောက်နေသောမျက်လုံးများနှင့်ကြည့်နေကြ သည့်အပြင်တစ်ခါတစ်ရံဧပရယ်နှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံမိပါကမျက်စိမှိတ်ပြခြင်း၊ရိုင်းရိုင်းပြပြမကြားတကြားပြောခြင်းတို့ကိုလုပ်နေကြသဖြင့် ဧပရယ်မှာကိုယ်ဟန်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အလှမပေါ်အောင်ထိုင်ရင်းစိတ်ကျဉ်းကြပ်နေမိသည်။သို့သော်ဧပရယ်ဘယ်လိုနေနေလှပ လွန်းသောရုပ်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုမဖုံးကွယ်နိုင်။ဧပရယ်ဝတ်ထားသည်ကိုလည်းကြည့်ပါဦး။ကြက်သွေးရောင်ရင်ဖုံးအင်္ကျီလက်ပြတ်ခါးတိုလေးကိုတင်းယင်းစွာဝတ်ထားသဖြင့်တစ်ခါတစ်ခါကိုယ်ခန္ဓာအလှုပ်တွင်ဖွေးဥ၍ရွှေရောင် ဝင်းနေသောခါးသားလေးကအင်္ကျီနှင့်ထဘီကြားမှလက်နှစ်ဆစ်ခန့်ပေါ်ပေါ်သွားတတ်သည်။ထို့ပြင်အင်္ကျီသားမှာလည်းပါးလွှာပျော့ ပြောင်းနေသဖြင့်သေချာကြည့်လျှင်ရုန်းကြွဖောင်းအိနေသောရင်သားအစုံပေါ်မှဘော်လီရင်ပုံခွက်လေးကိုမြင်နေရသည်။
ဘော်လီပေါ် မှပန်းကနုတ်များကိုပါဖောက်ထွင်းမြင်နေရသည့်အပြင်ဘော်လီအပြင်သို့လျှံထွက်နေသောတင်းယင်းလုံးဝန်းသည့်ရင်သားစိုင်အချို့ကို ပါအတော်ထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်။ဧပရယ်ဧ။်လည်တိုင်ကျော့ကျော့ဝင်းဝင်းလေးမှာလည်းစိန်ဆွဲကြိုးအသေးတစ်ခုဆင်မြန်းထားရာ ဧပရယ်ဧ။်အလှအပများမှာအန္တရာယ်ကိုဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့သို့ရှိသည်။ကားပေါ်ပါလာသူများကလည်းဧပရယ်ဧ။်တင်းယင်းမို့မောက်သော ရင်သားများ၊လုံးတင်း၍လိမ္မော်ရောင်ထဘီအပျော့လေးထဲမှတင်းယင်းစွာရုန်းကြွနေသောတင်သားများ၊လုံးဝန်းဖြောင့်စင်း၍ထဘီပျော့ အောက်မှကောက်ကြောင်းအတိုင်းပေါ်နေသောဧပရယ်ဧ။်ပေါင်တံလှလှနှစ်ချောင်းတို့ကိုမျက်တောင်မခတ်ဟန်မဆောင်ပဲကြည့်ရင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဘာတွေတွတ်ထိုးနေကြသည်မသိ။
ဧပရယ်မနေတတ်တော့။ကိုကတော့ဧပရယ့်ဘေးတွင်မျက်နှာပေါ်သို့ ဦးထုပ်တစ်လုံးတင်၍အိပ်မောကျနေသည်။ယောက်ျားကြီး၆ယောက်ကမျက်တောင်မခတ်တမ်းပေါ်တင်ကြီးကြည့်နေကြသဖြင့်ဧပရယ် ကိုယ်လုံးလေးကိုမောင့်ဖက်သို့လှည့်၍ထိုသူများကိုတစောင်းကျောပေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်လှည့်၍ရင်သားအလှကိုကွယ်လိုက်သည်။ သို့သော်ထိုသို့လုပ်လိုက်ခြင်းကထိုသူများအတွက်မြင်ကွင်းပိုကောင်းသွားစေသည်။ဧပရယ်ဧ။်တင်းယင်းနေသောကျောပြင်ပေါ်မှချိတ်၇ခုတပ်အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ဇာဘော်လီလေးကိုထိုသူများမြင်အောင်တမင်ပြသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ ဧပရယ်ဧ။်အင်္ကျီမှာပုံမှန်အတိုင်းရုတ်တရက်ကြည့်လျှင်မသိသာသော်လည်းသေချာကြည့်လိုက်ပါကအတော်ပါးသည်။ အထဲမှအသားရောင်ချိတ်၇ခုတပ်ဇာဘော်လီလေးကိုအထင်းသားမြင်နေရသည့်အပြင်ဘော်လီချိတ်များကိုပါရမက်သွေးကြွဖွယ်မြင်နေရသည်။
ဧပရယ်ဧ။်ပြည့်ဖြိုးသောပုခုံးသားလေးနှစ်ဖက်ပေါ်တွင်ဘော်လီကြိုးလေးကအနည်းငယ်နစ်ဝင်နေရာထိုယောက်ျားများအတွက်အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းဖြစ်နေသည်။ဘော်လီလေးကလည်းကျပ်ထုပ်နေသည်။ထို့ပြင်ဧပရယ်မှာခပ်စောင်းစောင်းလေးဖြစ်နေသဖြင့်သေးသွယ်သောခါးနွဲ့လေးမှာလိမ်ကျစ်နေပြီးခါးသားဖြူဖြူနုနုလေးမှာရမ္မက်သွေး ကြွဖွယ်လက်၃လုံးစာခန့်ပေါ်နေသည်။ထို့ပြင်ဘေးတိုက်မြင်နေရသောတင်းအိနေသည့်ရင်သားများမှာလည်းဘော်လီဝတ်ခဲ့၍သာတော် တော့သည်။ဘရာစီယာသာဝတ်ခဲ့ပါကထိုယောက်ျားများမည်သို့ဖြစ်နေမည်မသိ။ဧပရယ်ဝတ်ထားသောဘော်လီမှာချိတ်၇ခုပါသော် လည်းအခြားအမျိုးသမီးဝတ်ဘော်လီများနှင့်ပုံစံဆင်တူသည်။ဘော်လီကြိုးမှာအနည်းငယ်သေးပြီးဘော်လီကိုအပါးစားပိတ်ချောစအနု ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ရင်ပုံခွက်နေရာသာအနည်းငယ်ထူသောပိတ်ရှိပြီးကျန်နေရာများမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်တင်းယင်းစွာကပ်နေသည်။
ထို့ပြင်ဧပရယ်ဧ။်လုံးဝန်းဖွံ့ထွားသောတင်သားတလုံးမှာလည်းခုံပေါ်မှအနည်းငယ်ကြွနေသဖြင့်ပိတ်ပျော့ထဘီပါးလေးအောက်မှပင်တီ အရာလေးကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရသည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကားပေါ်မှယောက်ျားများဧ။်အပြုအမူများမှာရိုင်းသထက်ရိုင်းလာသည်။ မှောင်လာသည့်အပြင်လမ်းဘေးတွင်အိမ်ခြေတစ်ခုမှမရှိသဖြင့်ထိုသူတို့အတင့်ရဲလာကြသည်။ ဧပရယ်ဧ။်ဘေးတိုက်မြင်ရသောခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းမြင်ကွင်းကလည်းကောင်းလွန်းနေသည်။ရင်သားအစုံကရှေ့ကိုလုံးဝန်းစွာ ကော့ထွက်နေပြီးသေးသွယ်ချပ်ရပ်သောဝမ်းဗိုက်သားနှင့်ခါးကျဉ်ကျဉ်လေး။ထိုအောက်မှရေဖြည့်ထားသည့်ပူစီဖောင်းများလိုလုံးကော့ နေသည့်တင်စိုင်တင်းတင်းအိအိကြီးများကထိုသူတို့အားစိတ်ရိုင်းများအစွမ်းကုန်ဝင်စေသည်မှာမဆန်းပါ။
ကူလီတစ်ဦးကဧပရယ်ကောင်းစွာကြားနိုင်သောအသံဖြင့်”တောက်အိုးကြီးတွေကတင်းနေတာပဲကွာလိုးလိုက်ရရင်တော့”ဟုသူ့ဘေး မှလူကိုလှမ်းပြောပြီးဧပရယ်ကိုပြီတီတီလှမ်းကြည့်သည်။ဧပရယ်ဧ။်ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာမှာကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ရှက်မှုကြောင့် တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။မဖြစ်တော့။ကို့ကိုနိုးရတော့မည်။”ကိုကိုရေထပါဦး””အင်းအင်းချစ်ဘာလဲ””ဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲမသိဘူးကားပေါ်မှာလည်းယောက်ျားတွေချည်းပဲချစ် ကြောက်လာပြီကားပြောင်းလို့ရရင်ပြောင်းစီးရအောင်နော်ကို””အာာချစ်ကလည်းဒီအချိန်ကြီးဒီနေရာမှာဘယ်လိုကားပြောင်းစီးမှာ လဲ”ထိုစဉ်တွင်ပင်စပါယ်ယာက”ဟားဟားငါတို့အချစ်လေးဘာတွေတိုးတိုးတိုးတိုးပြောနေတာလဲမသိဘူးငါတို့ကိုလည်းပြောမှပေါ့” ဟုအော်ပြောလိုက်သည်။ဧပရယ်ရောကောင်းကျော်ပါစပါယ်ယာစကားကိုမကြားသလိုနေရင်းအကြံထုတ်နေကြသည်။
ထိုသူတွေဧ။်ရန်မှလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကောင်းကျော်အကြံထုတ်နေသည်။ ဧပရယ်ကလည်းချောချောလှလှလေးမို့ထိုသူတွေမိန်းမမမြင်ဖူးသလိုကြည့်နေကြသည်ကတော့အမှန်ပင်။ ဒီကားပေါ်မှာတော့ဆက်စီး၍မဖြစ်တော့။ကားကအဝေးပြေးလမ်းပေါ်တွင်မဟုတ်တော့။ဘယ်အချိန်တည်းကလမ်းကြောင်းပြောင်းသွား သည်မသိ။သစ်ပင်များကြားမှဖုန်ထူထူမြေလမ်းပေါ်တွင်မောင်းနေသည်။ဧပရယ်ရောကောင်းကျော်ပါဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိကြ။ ”ကားဆရာကားဆရာခဏရပ်ပေးပါဦးကျွန်တော့်အမျိုးသမီးအပေါ့သွားချင်လို့”လက်မထပ်ရသေးသော်လည်းပြသနာများကိုလျော့ သွားစေချင်သဖြင့်အမျိုးသမီးဟုသုံးနှုန်းလိုက်သော်လည်းထိုသူများကနောက်ဆုတ်မည့်ပုံမပေါ်။ ”ဟားဟားရပ်ပေးရမှာပေါ့ရပ်ပေးရမှာပေါ့ဟီးဟီး” ”မြန်မြန်ကိစ္စရှင်းခဲ့ဟီးဟီးးခင်ဗျားမိန်းမကချောတယ်တောင့်တယ်နော်ဟီးးးခင်ဗျားကံကောင်းတာပဲညတိုင်းဟီးးးဟဲဟဲ” ကာဆရာကအကြောင်းမရှိပဲတဟီးဟီးရီနေသည်။
အခြားယောက်ျားများကလည်းပြုံးစိစိနှင့်။”ကဲငါတို့ပူတူတူးလေးကရှူရှူးပေါက်ချင် လို့တဲ့ဟားဟားပေါက်ပါစေပေါက်ပါစေ”ဧပရယ်တစ်ချက်မျက်စောင်းထိုးကြည့်မိသည်။”ဟားးချစ်လေးကမျက်စောင်းထိုးရင်ပိုလှ” ”ကဲကဲသွားစရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေလည်းသွားထားကြသွားထားကြဟင်းဟင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်” ”ဟင်းဟင်းကိုယ့်လူတို့အစာစားဖို့ပြင်ထားကြဟင်းဟင်း” ဟင်းမဖြစ်တော့ကာမဘီလူးတွေဧ။်ကားကိုစီးလာမိပြီ။ ဧပရယ်နှင့်ကောင်းကျော်ထိုသူများကိုမကြားယောင်ပြု၍ကားပေါ်မှဆင်းလာကြသည်။အထုပ်များကိုမူကားပေါ်တွင်ပင်ထားခဲ့ကြသည်။
”ကိုချစ်တို့ချစ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်””အင်းချစ်ကိုယ်တို့ထွက်ပြေးကြရအောင်အထုပ်တွေကားပေါ်မှာဆိုတော့ကိုတို့ပြေးမယ် လို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး””ကိုဘယ်နေရာရောက်နေမှန်းမမသိတာလမ်းမလည်းမတွေ့ဘူးတောကြီးထဲမှာဘယ်သွားကြမှာလဲ” ”အင်းဒီညတော့တောထဲမှာပဲဖြစ်သလိုနေရတော့မှာပေါ့ချစ်ရယ်မကြောက်ပါနဲ့ကိုယ်တစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှ ကားတစ်စီးစီးကိုအကူအညီတောင်းပြီးသွားကြတာပေါ့”ကောင်းကျော်နှင့်ဧပရယ်တို့ခြေဦးတည့်ရာပြေးလာကြသည်။
သို့သော်လူသွားလမ်းအတိုင်းပြေးမိနေကြသည်ကိုနှစ်ယောက်လုံးသတိ မထားမိ။”ကိုချစ်မောလာပြီနောက်ကလိုက်မလာတော့ဘူးခဏနားကြရအောင်” ”ဟျောင်ဆော်ကြီးကအလန်းကြီးနော်ငါတို့တော့ပွတာပဲ””အေးပြန်လာမှယောက်ျားကိုချုပ်ပြီးမိန်းမကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးရမယ်’ ”ဟျောင်၈ယောက်လိုးတာခံနိုင်မှာလား””ဒီလောက်တောင့်တဲ့ဆော်ခံနိုင်မှာပေါ့မခံနိုင်ဘူးဆိုမင်းကမလုပ်ပဲနေမှာလား” ”တောက်သူဌေးသမီးလေးထင်တယ်ဖြူဖွေးနေတာပဲလိုးလိုက်ရလို့ကတော့” ”ဟာလုပ်မှာပေါ့လီးဒီလောက်ချောတဲ့နတ်သမီးလေးကိုဘယ်ကောင်မလိုးပဲနေမလဲ””တောက်ငါတို့တော့ဆွေမျိုးမေ့တော့မှာကွဟားဟားဆော်လေးကဖွေးပြီးသန့်နေတာပဲပစ္စည်းတွေကလည်းတင်းယင်းနေတာပဲ” ”အေးကွဘော်လီကြိုးတွေဆိုတင်းနေတာပဲဘော်လီကြိုးနှစ်ချောင်းဆွဲပြီးလိုးလိုက်ရလို့ကတော့ဟင်းဟင်း”
”ဖင်တွေကလုံးပြီးအိနေတာကွလေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြီးဖင်ချရမယ်””ဟျောင်၁၅မိနစ်တောင်ရှိနေပြီပြန်မလာသေးဘူး””အိတ်တွေထားခဲ့တာပဲဖွင့်ကြည့်စမ်း” ”ဟဘော်လီလေးတွေဟမွှေးနေတာပဲဟားဟားပင်တီတွေကလည်းမွှေးနေတာပဲကွ” ”ဟာဟျောင်ငါတို့တော့ပွပြီပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတစ်သောင်းတန်တွေအပြည့်ပဲ””အေးမင်းတို့အဲဒါပဲမက်နေဟိုဟာမကပြေးပြီလားမသိဘူး” ”လီးတယ်လွှတ်သွားဦးမယ်ဟျောင်အခြေအနေတစ်ချက်သွားကြည့်ဦး” မာလကအုပ်စုထဲမှတစ်ယောက်ကိုအခြေအနေကြည့်ရန်လွှတ်လိုက်သည်။ ”ဟမတွေ့တော့ဘူးပြေးပြီထင်တယ်” ”တောက်လီးပဲလီးလုပ်နေကြတာလားလိုက်ရှာကြလေ” ”အေးလိုက်ရှာမယ်” ”တောက်လွတ်သွားပြီထင်တယ်ကွာ””အဝေးကြီးမရောက်လောက်သေးဘူးသေချာရှာမယ်လူဖြန့်ရှာမယ်တွေ့ရင်ဝီစီမှုတ်လိုက်” ”ငါလိုးပဲကွာငါတို့တော့ငတ်ပြန်ပြီထင်တယ်””တောက်စားရခါနီးမှကွာလီးပဲ” မာလတို့မှာနာရီဝက်ခန့်ရှာသော်လည်းမတွေ့ကြသဖြင့်လွတ်သွားနှမျောတသတောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေကြတော့သည်။
”ဟာဟျောင်တွေဒီမှာမြက်တွေကိုလူတိုးထားတယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းကားနဲ့လိုက်ကြမယ်တက်ကြသူတို့ရွာရောက်သွားရင် ငါတို့ငတ်ပြီကွ” ”တောက်ဟျောင်တွေလီးပဲနာရီဝက်လောက်တောင်ရှိနေပြီမတွေ့သေးဘူးလီးပဲကွာ” ”အေးကွာရွာဖက်ရောက်သွားလောက်ပြီတောက်ဆော်ကအလန်းစားကြီးကွာတောက်” ”လီးဟျောင်တွေမရှာနဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ခဏနေရဲသွားတိုင်မှရဲတွေလိုက်လာဦးမယ်လာသွားမယ်”မာလတို့မှာစားရကာနီးမှကပ်လွတ်သွားသဖြင့်မကျေမနပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းဆဲဆိုနေကြသည်။ ”တောက်ကားဆီကုန်တာပဲအဖတ်တင်တယ်” ”လီးလားငါတို့မှမတွေ့တာဘာတတ်နိုင်မှာလဲ” ”ဟာဟျောင်တွေရှေ့မှာနှစ်ယောက်လိုက်လိုက်မြန်မြန်မောင်း” ”ဟင်ကိုကိုနောက်မှာလိုက်လာကြပြီထင်တယ်””တောက်လူမဆန်တဲ့ကောင်တွေချစ်လာပြေးရအောင်” ”ဟာရှေ့မှာပြေးပြီလိုက်လိုက်”ဧပရယ်နှင့်ကောင်းကျော်မှာချုံပုတ်များထဲသို့ပတ်ပြေးသော်လည်းနောက်မှကားဖြင့်လိုက်သဖြင့် လွတ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းနေသည်။
”ဟားဟားမိပြီချစ်လေးကမပြောမဆိုနဲ့ဘယ်ထွက်သွားတာလဲ” ”ခင်ဗျားတို့မိုက်ရိုင်းလှချည်လားဒါကျုပ်မိန်းမဗျ”ကောင်းကျော်ကအနီးရှိထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုကောက်ဆွဲလိုက်သည်။ ”ဟျောင်တွေစလိုက်ရအောင်”ကောင်းကျော်မှာလူရည်သန့်တစ်ဦးသာဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကစ၍ရန်မဖြစ်ဖူးခဲ့သဖြင့်လူ၎ယောက်ဧ။်ဝိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုမခံနိုင်။”ဟျောင်တွေဒီကောင့်ကိုကြိုးတုပ်ထားစမ်းဘောင်းဘီချွတ်ထားလိုက်””ဟားဟားမာလဘာလုပ် မလို့လဲဟျောင့်””ငါလိုးမမေးမနေနဲ့မြန်မြန်ချည်စမ်း”မာလဆိုသူဒရိုင်ဘာကပြောလိုက်သည်နှင့်အခြားသူများမှာစောဒကမတက်ကြ တော့။ကောင်းကျော်အားပါးစပ်ထဲသို့အဝတ်စများထိုးထည့်၍ပါးစပ်ကိုအဝတ်စီးကာသစ်ပင်တွင်ချည်ထားလိုက်သည်။
”ဟဲဟဲချစ်လေးကိုယ်တို့ကချစ်လေးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးချစ်လေးအပေါက်ထဲကိုယ်တို့လီးပဲထည့်မှာပါဟဲဟဲ””ချစ်လေးရဲ့အပေါက်ထဲကိုကိုယ်တို့လီးချောင်းတွေထည့်ပြီးလိုးရုံပဲဟဲဟဲချစ်လေးလည်းအကျိုးမယုတ်ကိုယ်တို့လည်းဖီးရှိဟဲဟဲ” ”ရှင်ရှင်တို့လူစိတ်မရှိကြဘူးလားဟင့်ဟင့်လွှတ်ပါကျွန်မကိုလွှတ်ဟင့်ဟင့်” ကောင်းကျော်မှာမိမိဧ။်ဇနီးလောင်းလေးကိုထိုသူ၈ယောက်ဘာလုပ်တော့မည်ကိုသိသဖြင့်သာမန်အရွယ်လီးမှာတောင်မတ်နေသည်။ မာလဆိုသူကကားကိုကောင်းကျော်ရှေ့တည့်တည့်တွင်ဖင်ထိုးလိုက်ပြီးအော်ဟစ်ရုန်းကန်နေသောဧပရယ်ကိုဆွဲခေါ်လာကြသည်။ ဧပရယ်မှာဘာအဝတ်မှမချွတ်ရသေးသော်လည်းအဝတ်အစားများမှာဖရိုဖရဲဖြစ်နေသည်။ သေးကျင်လွန်းလှသောခါးလေးအောက်မှလုံးတင်းပြီးပြည့်ဖောင်းလှသောဧပရယ့်အိုးကြီးနှစ်လုံးမှာခြေလှမ်းတိုင်းတွင်တစ်ချက် ချင်းတုန်ခါနေသည်။
လှပဖူးရွနေသောမျက်နှာလေးမှာငိုယိုရုန်းကန်နေသဖြင့်မဲ့နေသော်လည်းချောဆဲ။ ”ဟျောင်တွေဒီစော်ကြီးကိုငါကော့ပျံသွားအောင်ကိုင်ပြမယ်မင်းတို့တွေကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးပညာယူကြငါပြီးရင်မင်းတို့အလှည့် ပေါ့ဟိုကောင်ချက်ကြီးဗီဒီယိုရိုက်ထားစမ်း””ဟင့်ဟင့်မမလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်ရှင်တို့လိုချင်တာယူသွားကြပါဟင့်ဟင့်” မာလဆရာဝန်မချောလေးဧပရယ်အားစလုပ်တော့သည်။”ဟျောင်တွေငါတစ်ယောက်တည်းနိုင်တယ်မင်းတို့ဟိုနားကနေကြည့်ကြ” အခြားသူများမှာလည်းထိန်းမရသောတဏှာမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေကြသည်။
မာလအပါအဝင်ထိုသူများဧ။်ကိုယ်တွင်အဝတ်မရှိတော့ သဖြင့်မတောင့်တတောင်ဖြစ်နေသောလီးများတောင်မတ်နေသောလီးများမှာမည်းမည်းတုတ်တုတ်ဖြင့်ထိုးထောင်နေကြသည်။ ကားဘက်ထရီဖြင့်၂ပေမီးချောင်းမှာထိန်လင်းနေရာမြင်ကွင်းကိုပြတ်သားရှင်းလင်းစွာမြင်နေရသည်။”ဟင့်ရှင်လူယုတ်မာလွှတ်လွှတ်ဟင့်ကယ်ကြပါဦးရှင်ကယ်ကြပါဦးကျွန်မကိုမတရားကျင့်နေကြပါတယ်” ”ဖြန်းဖြန်းအင့်ဟင့်မင်းအော်လို့လည်းဒီတောထဲမှာဘယ်သူကြားမှာလည်းဒီလောက်အော်ချင်တဲ့ကောင်မအော်အောင်ကိုလိုးပေး ဦးမယ်”မာလကရုန်းကန်နေသောဧပရယ်အားကားပေါ်မှချထားသည့်စားပွဲခုံပေါ်တွင်ကိုယ်တစ်ပိုင်းဖိ၍ကုန်းခိုင်းထားသည်။ ”ကောင်မရာမင်းလည်းယောက်ျားရှိတာပဲအေးဆေးခံစမ်းပါမင်းလည်းခံဖူးနေတာပဲကိုစောက်ပိုမလုပ်နဲ့ဖြန်းးးးးး” ”မင်းစောက်ဖုတ်ထဲလီးတစ်ချောင်းဝင်ထားပြီးပြီပဲနောက်ထက်ထပ်ဝင်လို့မင်းအတွက်ဘာမှအကျိုးမယုတ်သွားဘူးဟဲဟဲဟဲ” အပျိုမချောလေးဧပရယ်ကတော့မကြားဝံ့မနာသာစကားများကိုမချေပနိုင်ပဲအားကုန်ရုန်းကန်နေရသည်။
မာလဧ။်လီးတံကြီးမှာဧပရယ်ဧ။်လုံးဝန်းတင်းယင်းနေသောဖင်နှစ်လုံးကြားတွင်အမြောင်းလိုက်ဖိဝင်နေသည်။ဧပရယ်မှာရုန်းကန်နေသ ဖြင့်မာလဧ။်ပေါင်ခြံအားဖင်ဖြင့်ဖိပွတ်ပေးသလိုဖြစ်နေသည်။မာလကဧပရယ်ဧ။်နို့အုံတင်းတင်းနှစ်အုံကိုမိမိရရကိုင်ညှစ်ပေးသည်။ ဧပရယ်မှာသန်မာသောယောက်ျားကြီးဧ။်ဖိချုပ်ထားခြင်းခံနေရသဖြင့်ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်။မာလကဧပရယ်ဧ။်ဖင်နှစ်လုံးအားအပြင်မှ လီးဖြင့်ဖိညှောင့်ပေးရင်းတင်းရင်းလှပသည့်ဧပရယ်ဧ။်နို့အုံနှစ်အုံကိုလည်းဆုပ်ချေသည်။သူစိမ်းယောက်ျားအလုပ်ကြမ်းသမားကြီးများ ဧ။်သားမယားပြုကျင့်ခြင်းခံရတော့မည်ကိုသိသဖြင့်ဧပရယ်စိတ်မပါသော်လည်းသဘာဝအရပန်းလေးထဲမှအရည်အနည်းငယ်စီးကျလာ သည်။
”ရှိးးးနို့တွေကတင်းနေတာပဲမင်းလိုအရွယ်ကောင်းမိန်းမချောချောတွေကိုငါအမြဲမှန်းပြီးလိုးနေရတာရှိးးးအိုးးဖင်တွေကလည်း တင်းအိနေတာပဲမင်းကိုဖင်လည်းလိုးပေးရမယ်””ဟင့်ရှင်တို့တွေလူစိတ်မရှိကြဘူးလားဟင့်ဟင့်လွှတ်ပါကျွန်မမှာယောက်ျားရှိပါ တယ်ဟင့်ဟင့်””ရှိးးးးနို့တွေကကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာမင်းယောက်ျားလည်းဟိုမှာတွေ့လားလီးတောင်နေပြီငါတို့ကမင်းယောက်ျား လိုးတာထက်၁၀ဆကောင်းအောင်လိုးပေးမှာဟားဟား””ဟင့်ဟင့်မလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်” ”ဟားဟားဟျောင်တွေမယားကိုမုဒိမ်းကျင့်မှာကိုလင်ကလီးတောင်နေတယ်ကွဟားဟားကြည့်ကြစမ်း” မာလကဧပရယ်ဧ။်
ခါးနွဲ့လေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ချုပ်ထားရင်းနောက်မှမှန်မှန်လေးညှောင့်ပေးနေသည်။ဧပရယ်ကားရုန်းကန်ဆဲ။ ဧပရယ်ဧ။်ခါးတိုအင်္ကျီနှင့်ထဘီကြားမှလက်၎လုံးခန့်ပေါ်နေသောခါးသားမွတ်မွတ်လေးများမှာနူးညံ့လှသည်။ ”ဖြုတ်ဖောက်ဖောက်”မာလကဧပရယ်ဧ။်နူးညံ့ဝါဝင်းနေသောလည်တိုင်လေးကိုစုပ်ရက်ရင်းဧပရယ်ဧ။်ရင်ဖုံးအင်္ကျီနှိပ်သီးများကိုတစ် လုံးချင်းဖြုတ်သည်။၃လုံးခန့်ဖြုတ်ပြီးသောအခါမာလဆက်မဖြုတ်တော့။ဝါဝင်းနုအိပြီးဘော်လီထဲမှလျှံထွက်နေသောရင်ညွှန့်လေးကို လက်ကြမ်းကြီးဖြင့်ပွတ်ပေးသည်။နို့သီးခေါင်းများကိုမနှိုက်သေး။အောက်ကလည်းလီးဖြင့်ဧပရယ်ဧ။်ဖင်နှစ်လုံးကြားသို့ပုံမှန်လေးတစ် ချက်ချင်းညှောင့်ပေးလိုက်လီးဖြင့်ဖိပွတ်လိုက်လုပ်ပေးနေသည်။အမှန်ကမာလဧပရယ်အားချက်ချင်းအဝတ်များချွတ်၍တက်လိုးလို့ရ သည်။သို့သော်တစ်ဆင့်ချင်းသွားခြင်းဖြင့်ပိုမိုရင်ခုံစရာကောင်းပြီးဧပရယ်ကိုလည်းစိတ်ကြွလာအောင်လုပ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဧပရယ်ဧ။်နုအိလှသောရွှေအိုရောင်နို့အုံလေးတစ်အုံမှာတစ်ခြမ်းနီးပါးပင်ပေါ်နေပြီ။နို့သီးခေါင်းဖုံးရုံသာရှိတော့သည်။
မာလကဧပရယ်ဧ။်ဘော်လီရင်ပုံခွက်လေးအားဖြည်းဖြည်းလေးညှစ်လိုက်အင်္ကျီပေါ်မှဧပရယ်ဧ။်နို့နှစ်လုံးကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းညှစ်ပေး လိုက်ဖြင့်ဧပရယ်အားစိတ်ဆွနေသည်။”အအဟင့်ဟင့်မလုပ်ပါနဲ့”ဧပရယ်ဧ။်ရုန်းကန်မှုများအားလျော့လာသည်။ ဧပရယ်ဧ။်မွှေးပျံ့နေသောရနံ့သင်းသင်းလေးကမာလဧ။်လီးကို၉၀ဒီဂရီတောင်မတ်လာစေသည်။ ”ဟဲဟဲ….ဒီထဲကဘာတွေလည်းဟအိစိအိစိနဲ့….ဟဲဟဲဟဲ….ကြည့်ရအောင်” ဧပရယ့်နို့အုံများမှာတင်းယင်းအိထွေးနေသည်။ ”မှန်းစမ်း…ဟဲဟဲ…ကျွဲကောသီးတွေလား…ဟဲဟဲဟဲ” ”ဟို…ရှင်ရှင်…ကျွန်မအသားကိုမ…မထိနဲ့…..ဟင့်ဟင့်…လူယုတ်မာ” မာလကဧပရယ်ဧ။်အင်္ကျီနှိပ်သီးများအားလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးအင်္ကျီဆွဲချွတ်သည်။ဧပရယ်မှာအင်္ကျီအချွတ်မခံပဲအတင်းဆွဲ၍ရုန်းသည်။ သို့သော်မာလကဧပရယ်ဧ။်ဘော်လီထဲသို့လက်နှိုက်၍နို့သီးခေါင်းလေးကိုဆွဲလိမ်လိုက်သည်။
”အားးအအဟင့်” ဧပရယ်ခေါင်းလေးမော့ပြီးခါးလေးကော့သွားသည်။မာလကဧပရယ်ဧ။်လက်နှစ်ဖက်ကိုစားပွဲပေါ်သို့အရှည်လိုက်စုချုပ်၍တင်လိုက်သည် ထို့နောက်ဧပရယ်ဧ။်အင်္ကျီအားအောက်မှစ၍လှန်တင်လိုက်သည်။ဖြူဝင်း၍ရွှေရောင်တောက်နေသောအတွင်းသားလေးများပေါ်လာ သည်။ထဘီအထက်ဆင်စလေးမှာဖြူဝင်းနွဲ့ပြောင်းသောခါးလေးပေါ်တွင်တင်းယင်းစွာပတ်ထားသည်။ကားစွင့်လုံးဝန်းသောဧပရယ် ဧ။်ဖင်နှစ်လုံးမှာတင်းကျပ်သောထဘီအပျော့လေးအောက်မှရုန်းကြွနေသည်။မာလကဧပရယ်ဧ။်
အင်္ကျီအားပုခုံးနားထိလှန်တင်လိုက် သည်။တင်းယင်းနေသောအသားရောင်ဇာဘော်လီလေးမှာဧပရယ်ဧ။်ကျောပြင်ပေါ်တွင်တင်းနေသည်။နူးညံ့သောပိတ်ချောစဖြင့် လုပ်ထားသဖြင့်ဘော်လီမှာတင်းပြီးအသားတွင်ကပ်နေသည်။မာလကဧပရယ်ဧ။်တင်းနေသောဘော်လီချိတ်များကိုတပ်မက်စွာကိုင် ကြည့်သည်။မာလကအင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်သော်လည်းဧပရယ်ကတင်းခံနေသဖြင့်ချွတ်မရ။”ဖြောင်းဖြန်းအင့်ဟင့်ဟင့်” ”ကောင်မအင်္ကျီချွတ်ဖို့ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း”မာလကဧပရယ်ဧ။်ဖြူနုသောလည်ကုပ်လေးကိုနှစ်ချက်ဆင့်ရိုက်လိုက်သည်။အားပါလွန်းသဖြင့် ဧပရယ်မရုန်းရဲတော့။မာလကဧပရယ်ဧ။်အင်္ကျီအားဆွဲချွတ်၍ကားပေါ်ပစ်တင်လိုက်သည်။ဧပရယ်မှာအပေါ်ပိုင်းတွင်ဘော်လီလေးတစ် ထည်သာရှိတော့သဖြင့်အတွင်းသားများမှာအတော်ပင်ပေါ်နေသည်။ဖြူဝင်း၍လုံးတင်းနေသောဧပရယ်ဧ။်စံချိန်မှီနို့နှစ်လုံးမှာဘော်လီ ထဲမှ၃ပုံ၁ပုံခန့်လျှံထွက်နေသည်။
ဧပရယ်ဧ။်ဖြူနုသောလည်တိုင်တွင်ဆွဲထားသည့်ပလက်တီနမ်ဆွဲကြိုးလေးမှာရင်သားနှစ်မွှာကြားသို့ ရောက်နေသည်။ပြောလျှင်ယုံမည်မဟုတ်။ကောင်းကျော်မှာဧပရယ်အားသမီးရီးစားဘဝတွင်အခွင့်အရေးမယူခဲ့သလိုစေ့စပ်ပြီးသည် မှစ၍ယခုအထိဧပရယ့်နို့များကိုလုံးဝမမြင်ဖူးသေး။အင်္ကျီကျယ်သီးပင်မဖြုတ်ဖူးသဖြင့်ဧပရယ့်ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုဘော်လီခံလျက်ပင် မမြင်ဖူး။ဧပရယ်ဝတ်ထားသောဘော်လီမှာအကောင်းစားဇာဘော်လီပုံဆန်းလေးဖြစ်သည်။ချိတ်၇ခုပါသော်လည်းခါးကတိုသည်။ ထို့ပြင်အသားတွင်ကွက်တိကပ်နေသည်ရွှေအိုရောင်ဝင်းနေသောဧပရယ့်ရင်အစုံမှာဘော်လီထဲမှလျှံထွက်နေသည်။ ကောင်းကျော်ကမူဧပရယ့်အားရွှေလိုဥ၍ယုယထားသူခပ်ညံ့ညံ့ယောက်ျားသာဖြစ်သည်။
ဧပရယ်မှာယခုထိတိုင်အောင် အပျိုစင်စစ်စစ်လေးအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ယခုတော့မိမိပင်ယုယုယယထားသည်ဇနီးလောင်းလေးအားမုဒိမ်းသမားများကသားမယားပြုကျင့်ကြတော့မည်။ မာလကဧပရယ်အားဘာမှမလုပ်သေးပဲဘော်လီပေါ်မှနို့ကိုင်လိုက်အောက်မှဖင်ကိုညှောင့်ပေးလိုက်ဖြင့်နှူးနှပ်နေသည်။ ဧပရယ်ဧ။်မွှေးပျံ့သောလည်ကုပ်လေးနှင့်လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးတို့ကိုအားရအောင်စုပ်ရက်ပေးသည်။ထို့နောက်ကုန်းရက် သားဖြစ်နေသောဧပရယ်ဧ။်ထဘီပျော့ပေါ်မှနေ၍နောက်သို့ပြူးထွက်နေသောပန်းလေးကိုအုပ်ကိုင်၍ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ ”အအရှိးးးအအဟင့်”ဧပရယ်ကော့ပျံသွားသည်။ထို့နောက်မှကြိုးတုပ်ခံထားရသောယောက်ျားကိုသတိရ၍အတင်းရုန်းပြန်သည်။ ဧပရယ်မှာကာမဆိပ်များတက်နေပြီဖြစ်သော်လည်တစ်သက်လုံးအိနြေ္ဒသိက္ခာဖြင့်နေလာသဖြင့်အားကုန်ရုန်းနေသည်။
”ငြိမ်ငြိမ်နေကောင်မမင်းစောက်ဖုတ်ယားနေပြီမဟုတ်လားငါတို့ကမင်းကိုကောင်းအောင်လိုးပေးမှာငြိမ်ငြိမ်ခံစမ်း”ဆရာဝန်မလေး ဧပရယ်မှာတစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းကောင်းမကြားဖူးခဲ့သောစကားများကိုနားမဆံ့အောင်ကြားနေရသဖြင့်ရမ္မက်သွေးများ အတော်ကြွလာသည်။သို့သော်တစ်သက်လုံးမာနရှင်လေးအဖြစ်နေလာခဲ့သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမုဒိမ်းသမားများလက်သို့မအပ်ချင်။ မာလကရုန်းကန်နေသောဧပရယ်ဧ။်လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်ချုပ်ထားပြီးထဘီစကတ်ချိတ်လေးကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်။ သို့သော်ဧပရယ့်ထဘီစကတ်မှာဒေါက်များနှင့်အံကိုက်ချုပ်ထားပြီးခါးအထက်နားမှချိတ်ပြုတ်သွားသော်လည်းရှေ့ဘက်မှချိတ်တစ်ခု ရှိနေသေးသဖြင့်ထဘီမှာကပိုကရိုဖြစ်သွားသော်လည်းမကျွတ်သေး။တင်းတင်းယင်းယင်းပင်ရှိနေသေးသည်။ မာလကဧပရယ်အားရှေ့မှချိတ်ဖြုတ်ရဦးမည်ကိုမသိသဖြင့်ဒီအတိုင်းချွတ်ဖို့ကြိုးစားသည်။
ဧပရယ့်ထဘီထဲလက်ကိုမရရအောင်လျှို၍ဖင်သားနှစ်လုံးကိုကိုင်၍ထဘီကိုတွန်းချွတ်သည်။ဖောက်ခနဲမြည်သံနှင့်အတူထဘီရှေ့ချိတ် ပြုတ်သွားပြီးတင်းအိလုံးဝန်းလှသောဧပရယ့်ဖင်သားကြီးများမှဇာပင်တီအပျော့လေးသာခံ၍ပေါ်လာတော့သည်။ ဧပရယ်မှာအတင်းရုန်းသော်လည်းမရတော့။ဧပရယ်ဧ။်ထဘီလေးမြေကြီးပေါ်သို့ပုံကျသွားပြီးဖြူဝင်းချောမွတ်နေသည့်ပေါင်တံလုံးလုံး လေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာသည်။ယခုအခါဧပရယ်ဧ။်ကိုယ်တွင်အသားရောင်ဘော်လီနှင့်အသားရောင်ပင်တီလေးသာကျန်တော့သည်။ မာလကဖြူနုသည့်ဧပရယ်ဧ။်ဝမ်းဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးကိုကိုင်၍ဖက်လိုက်ပြီးလီးကိုဧပရယ်ဧ။်ဖင်ကြားသို့ပိုကပ်ထားလိုက်သည်။ ဧပရယ်မှာရုန်းကန်ရလွန်းသဖြင့်မောဟိုက်နေသော်လည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေသည်။
မာလကဧပရယ်ဧ။်လုံးဝန်းအိစက်ဖွံ့ထွားသော တင်သားအိအိတင်းတင်းကြီးနှစ်လုံးကိုဖြန်းကနဲဖြန်းကနဲ၃ချက်ခန့်ဆင့်ရိုက်လိုက်ပြီးပင်တီကိုဆွဲဖြဲ၍လွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ မာလမှာဧပရယ့်အရင်အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးချောလေး၃ယောက်ကိုမုဒိမ်းကျင့်ဖူးသော်လည်းတစ်ယောက်မှဧပရယ်လောက်မခက်။ ဧပရယ့်ခမျာမှာတော့သူစိမ်းယောက်ျားကြီးများရှေ့တွင်ဖင်ဟောင်းလောင်းနှင့်ကုန်းနေရသဖြင့်ရှက်လည်းရှက်ကြောက်လည်းကြောက် သည်။အရေးထဲမာလဧ။်လက်ကြမ်းကြီးရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်နေသောဧပရယ့်စအိုဝနီနီရဲရဲလေးကိုဖြဲ၍ပွတ်နေသေးသည်။ပေါင်၂လုံးကြား အောက်ဖက်နားမှပြူးထွက်နေသောပန်းရောင်ရဲရဲအဖုတ်လေးကိုမာလကအသားမာတက်လက်ကြီးဖြင့်အုပ်ကိုင်၍ပွတ်ဆွဲပေးသည်။ ဧပရယ်ဧ။်အဖုတ်လေးမှာအပျိုလေးအတိုင်းပင်စိကပ်နေပြီးအမွေးများကိုပြောင်နေအောင်ရိတ်ထားသည်။မာလကလီးမထည့်သေးပဲ ဧပရယ်ဧ။်
အတွင်းသားနီနီလေးထဲသို့လက်နှစ်ချောင်းထိုးထည့်ပြီးခပ်ကြမ်းကြမ်းမွှေပေးလိုက်ရာကာမအရသာကိုတစ်ခါမှမခံစားဖူး သောဆရာဝန်မလေးဧပရယ်မှာအရည်များအဆက်မပြတ်စီးကျလာတော့သည်။”အအဟင့်ဟင့်ဟင့်””ဖွတ်ဖွတ်ပလပ်” ”ဟဟျောင်တွေအထဲကဘာလဲဟ” ”ဟာာပါကင်လေးဟငါကလင်မယားမှတ်နေတာဟားဟားအဖုတ်ကောဖင်ကောပါကင်ဖွင့်ရတော့မယ်ဟားဟား” ”လီးတယ်ဟေ့စားရကံကြုံတော့အပျိုမချောချောတောင့်တောင့်လေးကိုမုဒိမ်းကျင့်ရတော့မယ်ဟေ့ဟားဟား” ဧပရယ်မှာတော့မိမိဘဝလက်တွဲဖော်အတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်အပျိုစင်ဘဝအားအလုပ်ကြမ်းသမားကြီးကအရသာခံ စားသုံးတော့မည်ဖြစ်၍အလွန်ကြောက်နေသလိုကာမစိတ်များလည်းကြွနေသည်။
”စောက်စိလေးကနီရဲနေတာပဲကွာ”မာလကဧပရယ်ဧ။်နီနီရဲရဲအစိလေးအားလက်ညှိုးနှင့်လက်မညှပ်ကာပွတ်ဆွဲလိုက်ရာဧပရယ် တကိုယ်လုံးအကြောများဆွဲ၍တုန်သွားပြီးအရည်များဒလဟောထွက်ကာတစ်ချီပြီးသွားတော့သည်။ ”ရှင်အင့်ရှင်ရှင်မမလုပ်ပါနဲ့တော့” ဆရာဝန်မချောလေးဧပရယ်ဧ။်တင်းယင်းအိစက်သောနို့နှစ်လုံးမှာမောပန်းမှုကြောင့်နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြစ်နေသည်။ မာလကမောဟိုက်နေသောဧပရယ်ဧ။်အဖုတ်လေးကိုလက်ဖြင့်ဖြဲထားလိုက်ပြီး၈လက်မခန့်ရှည်သောဂေါ်လီထည့်ထားသည့်လီးမည်း ကြီးဖြင့်တေ့လိုက်သည်။ထို့နောက်မထည့်သေးပဲဧပရယ်ဧ။်အစိလေးအားဒစ်ဖြင့်၎ချက်ခန့်ပွတ်ဆွဲလိုက်သည်။ဧပရယ်မှာမောလည်း မောကာမအရသာများကလည်းပြင်းလွန်းသဖြင့်လုံးဝမရုန်းတော့။မာလကဧပရယ်ဧ။်အဖုတ်ထဲသို့လီးမည်းကြီးကိုဒစ်ဖူးမျှသာထည့်၍ တေ့ထားပြီးအနေအထားကိုကောင်းကျော်ကောင်းစွာမြင်နိုင်စေရန်ဘေးတိုက်ပြောင်းလိုက်သည်။
ကောင်းကျော်မှာမိမိမျက်စိရှေ့တွင် မိမိဧ။်ဇနီးလောင်းလေးကိုလိုးရန်လီးဖြင့်တေ့ထားသည်ကိုနီးနီးကပ်ကပ်တွေ့ရသဖြင့်အတင်းရုန်းသည်။ကောင်းကျော်ဧ။်လီးမှာလည်း အစွမ်းကုန်တောင်မတ်နေသည်။”ကိုကိုရယ်ဟင့်ဟင့်ချစ်ကိုခွင့်လွှတ်နော်ကိုဟင့်ဟီးးး”ဧပရယ်မှာအနီးတွင်ရှိနေသော ကောင်းကျော်ဧ။်ပုခုံးတစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားသည်။မာလအချိန်မဆိုင်းတော့။ဧပရယ်ဧ။်ဘော်လီကြိုးနှစ်ချောင်းကိုဆွဲကာ လီးကိုဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။”ဗြွတ်ဗြစ်အအဟင့်အဟင့်ဟင့်””ရှိးးးမင်းစောက်ဖုတ်လေးကတင်းကျပ်စီးပိုင်နေတာပဲမိန်းမရာ” မာလဧ။်လီးကြီးမှာဧပရယ့်အဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ချက်ချင်းမဝင်သေး။ဒစ်သာဝင်၍တစ်နေသည်။ ကျပ်လွန်းနေသဖြင့်သွင်းရခက်နေသည်။ဧပရယ်မှာဖင်တုန်းများကိုလှုပ်ခါ၍ရုန်းသေးသော်လည်းဝင်ပြီးသားဒစ်ကပြန်မကျွတ်သွား။ မာလစိတ်မရှည်တော့။ဧပရယ့်ခါးနွဲ့လေးကိုဆွဲကာနို့အုံတင်းတင်းတစ်အုံကိုကိုင်၍လီးကိုသွတ်သွင်းလိုက်သည်။ဧပရယ်မှာအနီးတွင်ရှိနေသော ကောင်းကျော်ဧ။်
ပုခုံးတစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားသည်။မာလအချိန်မဆိုင်းတော့။ဧပရယ်ဧ။်ဘော်လီကြိုးနှစ်ချောင်းကိုဆွဲကာ လီးကိုဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။”ဗြွတ်ဗြစ်အအဟင့်အဟင့်ဟင့်””ရှိးးးမင်းစောက်ဖုတ်လေးကတင်းကျပ်စီးပိုင်နေတာပဲမိန်းမရာ” မာလဧ။်လီးကြီးမှာဧပရယ့်အဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲသို့ချက်ချင်းမဝင်သေး။ဒစ်သာဝင်၍တစ်နေသည်။ ကျပ်လွန်းနေသဖြင့်သွင်းရခက်နေသည်။ဧပရယ်မှာဖင်တုန်းများကိုလှုပ်ခါ၍ရုန်းသေးသော်လည်းဝင်ပြီးသားဒစ်ကပြန်မကျွတ်သွား။ မာလစိတ်မရှည်တော့။ဧပရယ့်ခါးနွဲ့လေးကိုဆွဲကာနို့အုံတင်းတင်းတစ်အုံကိုကိုင်၍လီးကိုသွတ်သွင်းလိုက်သည်။၈လက်မလီးမဲကြီးကပထမကောက်ကွေးသွားကာတရစ်ချင်းဗြွတ်ကနဲဗြစ်ကနဲမြည်၍ဖောက်ဝင်နေသည်။
”ဗြွတ်ဖွတ်အားးးးဟင့်ဟင့်” ဧပရယ်ဧ။်အပျိုစင်ပန်းလေးထဲသို့မာလဧ။်၈လက်မလီးကြီးကအပျိုမှေးကိုဖောက်၍ဝင်သွားတော့သည်။ ”ဗြွတ်ဗြစ်ဖွတ်ဖွတ်ရှိးးးးငါ့လီးဝင်သွားပြီဟားဟားမင်းအပျိုဘဝကိုလီးနဲ့လိုးပြီးဖျက်ဆီးရတာကောင်းလိုက်တာရှိးးးး” အပျိုစင်သွေးစလေးအချို့မာလဧ။်လီးတွင်ကပ်လာသည်။”မိန်းမဖင်ကိုကော့ပေးထားလေဒါမှလီးပိုဝင်မှာပေါ့ချစ်လေးရဲ့ဟားဟား”မာလဧ။်လီးကြီးမှာတစ်ဝက်ခန့်ဝင်သွားပြီးဧပရယ်ဧ။်အဖုတ်လေးမှာလည်းစပါးလုံးတစ်ထောက်ခန့်ကွဲသွားသည်။ ”ဟင့်ဟင့်ကျွန်မရှင့်မိန်းမမဟုတ်ဘူးဟင့်ရှင်ပဲကျွန်မကိုမတရားကျင့်ပြီးတော့””ဟငါ့လီးတောင်မင်းစောက်ဖုတ်ထဲဝင်နေပြီငါ့မိန်းမ ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟားဟားခဏနေမင်းယောက်ျား၇ယောက်တောင်ထပ်ရဦးမှာမင်းကောင်ပဲလီးပါတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လဲလီးပါတယ်”……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရိုးမယျဖှဲ့